Tadiom-pitiavana | 11
Dia ahoana ! Dia inona no hataoko? Hoy i Hery tany an-tsainy tany. Ny fivezivezena manginy fotsiny, mandalo amin’ny sampan-draharahan’ny fanan-tany, ny biraom-panjakàna samihafa; mila tsy ho zakany intsony ny manodina ny familiana fiara fa ny sainy nisangodina tamin’ny antson’i Tahiana teo.
- Matoa i Malala hatramin’izay tsy niantso ahy, misy antony ao. Tena mafy tamin-dry zareo ilay teny Ivato. Ary matoa koa i Alexia tsy niatso ahy, mbola mangidy taminy ny nitranga taminay ilay nihaonanay farany. Ka i Ratrema indray ve, tsy vao mainka ompa vary raraka sy eson-teny angamba no azo eo!
Fa dia nahoana loatra ny fiainako no toy izao. Tiako loatra i Alexia. Ary tsy misy olona haiko hatakaloko azy. Dia nefa ireto zavatra nataoko. Tsy mahatan-damba fa tahaka ny milina tsindriana bokotra dia roboka. Roboka aiza? roboka anaty maimbo; tena loza letsy ity mahazo an’ialahy Ra-Hery. Dia mety ho marina tokoa ve ny hevitr’i Mihary! Ka tsy loza an!
Ity izy manao andrana ny fiainako koa no tena loza. Tahaka ireny zavatra fanaovana fanandramana anaty labôratoara ireny koa aho. Nasainy niara-nivavaka taminy tamin’ny alahady. Lazainy fa ny tarehy ratsy aza hono, izao efa misy mahay manova ho tsara, ka ny toetra indray ve.
Dia nazavainy teo izao toetran’i Mama izao, fa raha ny fahitany azy dia olona nahay niova toetra i Mama nefa tahaka ahy izao tamin’ny fahatanorany, ary izay làlana nizoran’i Mama izay no kendreny hanitsiana ahy.
Raha ny zavatra tsaroako hatramin’izay dia tsy nahita taratra ny hadalan’i Mama mihitsy aho. Nandàla fivavahana sy fihavanana, nitaiza ahy tamin’izany ary saika tsy nino mihitsy aho ilay hafatra farany noteneniny momba ny fiainany. Ary tsy miala ato an-tsaiko mihitsy ilay teniny farany hoe: ilay fitiavana nananan-drainao no atolory an’i Alexia.
Ary izay no anisan’ny antony tsy hahaizako manadino an’i Alexia, ary tsy izay ihany fa misy hery hafa manintona ahy aminy, ka rehefa manalavitra ahy izy dia mihenjana mila ho tapaka ilay tady vita fato-maty aminay roa.
Tsy gaga aho ny amin’ny ataon’i Mihary, izy dia tsy mba tia mianona amin’ny taranja iray fa dia hainy foana ny mampifangaro ny taranja hafa, fanaony tamin’izahay mbola niara-nianatra izany, eny fa na dia fahalalàna tsy mbola natao tany am-pianarana aza, hainy. Dia izy izao manana fahaizana manokana amin’ny fanananahana sy ny reny bevohoka izao nefa dia tsy misalasala akory mampihatra ny psykolojia amiko. Sahirana ialahy Ra-Hery raha iny no vadin’ialahy, lasa sehatra fanaovany fanandramana ialahy fa mila mitandrina!
Sendra nitsipalotra tamin’ny famantaran’ora ny mason’i Hery vao nahita fa tokony haka an’i Mihary izy fa efa vita izay ny famelabelarany. Famataran’ora nomen’i Alexia iny, iny no nanombohan’ny disadisa dia nitohy zavatra hafa indray. Soa fa teo i Tiana, ilay mifanoratra mailaka taminy tamin’ireny fotoana ireny nanoro hevitra azy izay tokony hataony. Saika hadinony marina fa tokony hijery ny mailaka izy kanefa aleony aloha tonga any Antananarivo.
Naviliny teo amin’ny lapan’ny tanàna ny fiarany ary i Mihary kay efa nijoro teo, tsy fantatra na efa ela na vao haingana.
Najanon’i Hery teo anoloany ny fiara, nidina ny tohatra i Mihary; tsy nitsiky, tsy niteny fa nipetraka.
- “Ho aiza isika?” Hoy i Hery.
- “Hody any amin’ny hotely ka ho aiza indray. Ssshhh! Aleo mody ka!”
Tsy nisy nifampiresaka intsony teny an-dalana fa ny vata fandraisam-peo no naneno moramora sy nisiotsioka ny feon-kira malefaka.
Azon’i Hery an-tsaina fa tsy dia nanjary tamin’izy roa loatra ity andro iray ity, izy koa tsy te-hanohy resaka an’i Mihary aloha fa ilay antso finday tamin’i Tahiana teo no namaky ny sainy. Nefa tsy maintsy hifampiresaka lava indray rehefa avy eo izao. Anaovan’i Mihary izao karazana fanontaniana izao...
Tonga tao amin’ny hotely, samy nandray ny efitranony avy izy ireo ary rehefa vita ny fandroana dia nankao amin’i Hery i Mihary, mitondra boky sy taratasy vonona hanao ny fanadihadiana.
Tsy nisy nanjary izay fanontaniany fa toa misangodina be ihany, tsy hitan’i Hery izay havaly, i Mihary toa lasam-borona hafahafa.
Farany, tsy aritr’i Hery intsony:
- “Mihary an! Fa misy inona aminao e! Angaha tsy nanjary ny andronao androany no toa be fanahiana sy lasalasa saina izany ianao?”
Natsipiny teo ambony latabatra ny peniny, sady nikentrona no nijery an’i Hery.
- “Misy zavatra tsy azoko mihitsy!” Hoy ihany izy.
- “Tsy azonao ahoana, tantarao e! Ny ahy koa ange tena vizaka mihitsy aho tamin’ny asa e! Nivezivezy tetsy sy teroa, nitetitety birao.”
- “Tsy azoko e! Tsy nandeha amin’ny laoniny ny famelabelarana nataoko androany,” hoy i Mihary, “nisy fanontaniana aza tsy voavaliko fa nisangodina tao an-tsaiko izay tokony ho valiny. Ary ny tena loza dia lasa ilay olanao foana no mibahana ato an-tsaiko.”
- “Fa ahoana?” Sady te-hanohy hatrany i Hery.
- “Shh! Aleo aloha hijanona eo ny resaka fa sady mila tsy ho tantiko intsony ny hafanàna aty;” sady nitsangana i Mihary no nandao an’i Hery ary lasa namonjy ny efitranony.
I Hery kosa, zarany aza, nefa toa variana izy tamin’ilay tenin’i Mihary farany. Tsy dia nanaitra azy fa ny antontan-taratasy rehetra nandaniany ny androatokon’androny no naveriny nalahatra sy novakiany tsara. Kanefa, toa tsy afaka ao an-tsainy ihany koa i Mihary, te-hanome tambitamby sy fahatoniam-po izany izy.
Farany tsy naharitra fa nivoaka dia nosokafany mora ny varavaran’efitr’i Mihary, tsy nihidy, novoahainy kely.
Indro i Mihary matory eo ambony fandriana, mitafy lambam-pandriana tokana, ny lohalika somary miforitra maka aina sy mila tsy hahatsiaro izay ambonin’ny tany.
Nanatona i Hery, nijaikojaiko sao manaitra ity Dokoterany.
Nobanjininy tsara: ilay lamba manify dia manify ary nanaraka ny rafitry ny vatan’i Mihary, hita maranitra kely ireo lohanono roa ary manaloka tsotra fa tsy mitafy akanjo ity vehivavy: ilay lamba fotsiny no tako-kenatra aminy. Ny hafanana rahateo mila tsy ho tanty.
Nipetraka moramora teo amin’ny tongom-pandriana i Hery. Te-hanafosafo mafy izy, tsy ariny intsony, nesoriny mora ilay lamba, ary hitany amin’izay ny firafitry ny vatan’i Mihary tsy misy na dia lamba iray ary eny an-kodiny.
Nojereny tsara, nitsiriritra, ny ratsan-tanany no nasafony ny kibon-dranjo dongadonga tsara, nakariny hiakatra. Toa nisokatra ho azy ireo fe roa nampifanatrika ny fivaviana tamin’ny tarehiny.
Io ilay mariky ny maha-vehivavy, efa nisantatra ny fiainana vaovao vao andro vitsivitsy izay. Ny ratsan-tanany efa midina indray hamonjy ilay fari-pahasambarana amin’ny fikisaka mora dia mora, ary nampian’ny molotra mitohoka mora ihany koa amin’ny fe. Nikisaka nanaraka ny dian’ny ratsan-tanana teo. Farany naka ny hanitr’ilay zohy izy, ary nanomboka mandondona.
Asa tokoa, na efa tsapan’i Mihary ity ataon’i Hery na dia tena manonofy izy fa ny feny no novelariny bebe kokoa na dia tsy natosik’i Hery tehina iray aza.
Naleon’i Hery aloha nifoka ilay rivotry ny fahafinaretana ary natohony tampoka teo amin’ny fivavian’i Mihary ny molony. Tsapany fa mihetsika ny tanan’i Mihary mikaroka ilay faritra toa mitondra hafatry ny fitiavana any aminy any. Nandalo ny kibony iny, nidina ary nifanena tamin’ny lohany. Tsara, samy nankafy izy roa, ny molotra no navezivezin’i Hery teo amin’ilay harambaton’ny nofo malemy dia malemy ary miakatra hafanàna. Tsapany fa misy rano mitsoriaka moramora avy ao, notsenainy tamin’ny molotra ary noraisiny tamin’ny lela. I Mihary rahateo, vao mainka nankafy ity ataon’i Hery azy. Ilay tanany nanafosafo ny volony, toa manainga azy hanao tsaratsara kokoa.
Tena lafatra tokoa, tsy tambo isaina ilay tosam-pahasambarana nandalo taminy. Satriny tsy hijanona ilay rian’aratra madinika mivezivezy amin’ny vatany. Toa mamelona indray ny kiakiam-pitiavana nampimonomonona azy fa tsy tiany havoaka.
Tampoka, nisy tsirim-panentana tena nanaitra azy, ny lelan’i Hery amin’io mikaroka mafy ilay bokotra kely efa mihenjana aok’izany.
Taitra i Mihary, nijery ity ataon’i Hery. Tsara loatra, tiany hajanona nefa tsy nanana hery hanoherana an’I Hery izy. Ary naleony nankafy aza fa toa mananika ny lanitra mbola tsy nodiaviny akory izy.
Farany, izy no tsy naharitra fa niteny:
- “Hery an! Avia amin’izay! Avia ho’aho,” sady maingoty be mikaroka ilay fahasambarana tiany hotratrarina.
Niakatra i Hery, nandady tamin’ny vatan’i Mihary, orokoroka malefaka no nampandaloviny ny kibo sy ny tratra ary ireo lohanono roa. Farany, nosarangotin’i Mihary izy hifanoroka taminy. Naka tsiro ilay ranom-pahafinaretany hany sisa tavela. Oroka lavareny saika tsy nitsahatra.
Somary niharina i Hery, nanala ny akanjony rehetra, i Balita efa mijaridina ary efa vonona aok’izany. Ny tanan’i Mihary no namonjy azy voalohany ary tsy ela dia naka bahana teo anoloany i Hery. Nasafony in-dray mandeha, indroa, nikitika indray ilay bokotry ny fahafinaretana teo. Fahatelo dia nampidiriny moramora tany anatin’ny zohim-pahafinaretana.
Nifoka rivotra mafy i Mihary, tsapany ny fahafenoany, tsapany ilay firaisan’olon-droa efa nanaovany fikarohana an-taonany maro. Tsapany ny hevitry ny fitiavana arahin’ny firaisana.
Vao nihemotra kely i Hery dia nisy tsirim-panentana toa nandefa rian’aratra hafa indray tany anatiny tany.
Nandroso nihemotra teo i Hery, ny orokoroka nivezivezy tamin’ny molotra, ny tenda, ny hatoka. I Mihary mankafy ity lehilahy. Somary nakombony ny feny rehefa afaka folo minitra, niodina izy ary narahin’i Hery. Tsy nijanona raha tsy i Hery indray no teo ambaniny. Naforiny indray ny feny roa, i Hery amin’io tsy afa mihetsika intsony. Tiany ho izy indray no hitondra ny familiana.
Noraisiny sy nahitsiny hitsangana tsara ilay filahiana ary natohony teo aminy, ny lanjany no tosika nampiditra iny, ary ny maojany no nakariny sy nampidininy hitondra fahafinaretana tsy hita noanoa. Teo izy, elaela, sady mankafy ihany, ny masony no nakimpiny, ny sainy mikaroka ny lanitra fahafito.
I Hery koa amin’io, tsy fantatra intsony fa mikipy maso, mimonimonona.
I Mihary mitsapa ny fivaviany efa tena mando, ary mila handranoka eo ambonin’i Hery. Fantany amin’izay fa efa manakaiky azy ilay lanitra tiany hodiaviny. Nalefany mafimafy ny fihetsiny, nisefosefo izy, te-hikiakiaka arak’izay tratry ny aina.
I hery amin’io tahaka ny tsy ety an-tany intsony sady nibaradaka tampoka hoe:
- “Alexia!!!! Tena tsara be! Oouuuuiiii!”
Nijanona tampoka i Mihary! Taitra, ary tena gaga!
Nitsangana izy sady niala teo am-pandriana;
I Hery koa mba gaga, fa nisy inona. Fa lasa aiza ilay malalany teo....
Tadiom-pitiavana (Madagasikara) (tadiom_pitiavana@yahoo.fr)
Vao nivoaka ny Hopitaly i Malala, dia nandray ny findainy sady nikaroka ilay boky kely misy ny karazana laharana maro tao anaty poketrany.
- “Allo, Tojo? afaka mba miaraka amiko ve ianao izao? Misy fiara ianao? ... Tsara izany. Napetraky i Mahefa eto amin’ny Place de la Concorde aho. Nolazaiko taminy fa ianao no hiaraka amiko. Tena tsy mahalala toerana eto aho fa tongava an!... Hisotro kafe atsy amin’itsy Hotel de Crillon itsy aho mandra-pahatonganao. Ao aho no miandry.”
Lehilahy manana ny ny maha izy azy tokoa raha i Mahefa. Nahavita fianarana sy fiofanana tamina firenena matanjaka maromaro izy, efa niasa tamina karazana hopitaly ihany koa, ary tsy manambady aman-janaka ho velomina. Matetika izy no tazomin’ity hopitaly lehibe iray eto Paris ity, izay isan’ny niasany maharitra tokoa. Efa nitazona azy koa ny tany Etazonia, Alemaina, nanambitamby azy ny mba andraisany ny taratasy maha teratany azy, saingy nolaviny avokoa. Ny tena faniriany sy fahafinaretany indrindra indrindra dia ny mba ahafahany manampy ireo iray rà aminy, ireo malagasy sahirana nefa mila fitsaboana any amin’ny taniny. Impiry moa izy no nitondra fanafody sy fitaovana maro ho zaraina amina karazana toeram-pitsaboana eny ambanivohitra? Tsy zava-baovao aminy ny mianjaika ireo fitafiana faran’izay raitra indrindra, nefa fahazarany ihany koa ny mitafy amin’ny fomba faran’izay tsotra. Manendrika azy ny fitafy malagasy, ny satroka rarin’ny Sihanaka, ny samboady landin’Anosimpatrana, ny kapa hoditry Pochard… Hainy koa ny mampifandrindrany ny italiana sy ny frantsay toa an-dry Ermenegildo Zegna, ry Pierre Cardin, ry Kiton… Azo an-tsaina amin’izany ireo mety ho karazan’olona fantany, indrindra indrindra amin’ny maha mpitsabo mahay azy. Mankasitraka azy hatrany amin’ny sangany ka hatrany amin’ny madinika indrindra. Toa izany koa ireo mety ho karazan’olona misapaoritra sy miondrika eo anatrehany.
Napetrany teo amin’ny faritra ivon’ny hakanto sy hajan’ny Paris tokoa i Malala. Arabe mivelatra hatrany amin’arivo metatra toradroa any izay ravahan’ny gorodom-bato mahasondriana. Fiara maro no mifamoivoy eo, miankavia, miankavanana, mifanapaka, samy miriorio mafy aok’izany nefa dia tsy mba misy mifandona. Ravahan’ny filatsaky ny ranomandry madinika izay misafotofoto noho izato fitsokan’ny rivotra azy malefaka. Hanoherana ny hirifirin’ny hatsiaka aterak’izany indrindra no anaovan’i Malala ilay baoty somary matsoko loha mainty, migeja mananika hatreny amin’ny lohalika. Iray njehy monja no ahitana ny ampahany amin’izato hamandinan’ny tongony saronan’ny bà mifaninjitra miloko mavomanja mazava, miala avy eo no iantombohan’ny zipo mainty vita amin’iron’ny kasmira malefaka irony, manasongadina izato hafonjan’ny fitombenany. Misarona palitao kely mainty manomboka eo amin’ny tepany, izay mampiseho ny akanjo bà mavomanja mazava miakatra ny tendany. Salorany akanjo volom-biby lava hatreny an-kitrokely ireo rehetra ireo avy eo. Mihidy bokotra anoloana hatreo amin’ny lohalika ka ahitana ny ampahany amin’izato hakanton’ny ato anatiny. Izany rehetra izany no ampiany fonon-tanana vita amin’ny hoditra mainty, hilanjany ity poketra somary lehibe mainty, tsikaritry i Tojo hatramin’ilay sary sy soratra madinika teo amin’ny vatany “longchamp”. Toa nahavita kajy an-kandrina avy hatrany ny amin'izay mety ho fitambaram-bidiny izy nahita ny fianjaikan’i Malala.
- “Manao ahoana ianao? Miala tsiny fa manahirana anao.” Hoy Malala nitsiky nampiseho ireto nify fotsy mitandahatra toy ny nasiana lasitra, voadidin’ny molotra somary matevina, mitaratra miloko volontany. Ny maso voadio, tsy ahitana volo mitsiparaparaka, toa mitsiky manaraka ny endriny mandina fatratra, tsy matahotra ny ho simban’ny ririnina.
- “Salama,” sady somary niondrika i Tojo nampifanakaiky ny endriny, hanoroka ny takolany, tsy maninona fa mahafinaritra ahy aza.
Tamin’ny dimy ora hariva vao niditra ny trano i Malala telo mianaka. Nanampy azy nitondra ny karazan-karona feno entana niantsenana hatrao an-trano i Tojo. Voatetiny avokoa na ny magazain’i La Fayette, Madeleine, Champs Elysés, na ny Printemps sy ny sisa. Nisarika an’i Tojo hijanona hisakafo hariva i Malala, saingy nandà mafy izy sady nilaza tampoka fa mbola maika, eny fa na dia niangolàn’i Malala aza. Naroson’i Malala daholo izao antony rehetra izao mba handresen-dahatra an’i Tojo hijanona. Mba ho mariky ny fankasitrahana ny andro androany fotsiny anie hoy izy sady i Mahefa koa anie tsy hody hariva eo. Nandà hatrany ny tovolahy na dia tsikaritra tamin’ny fijeriny aza ny haherin’ny faniriany te hanaiky hoe “eny ary”. Rehefa tsy naharesy dohika an’i Malala teo i Tojo dia nilaza fa alina be izy vao afaka raha ho afaka. Ampahatsorana koa anefa no namalian’i Malala azy hoe
- “tongava aty rehefa vita izay hataonao ary e! na amin’ny firy na amin’ny firy. Tsy ato mihitsy ho’aho i Mahefa. Tsy mba matoky tss… antsoiko ianao? An!” sady nitsiky niangoty izy. Mailaka ery ny famindran’i Tojo hamonjy varavarana hivoahana. Nanaraka azy i Malala nanome ny anjara harony miisa telo, misy karazam-pitafiana sy ranomanitry Douglas izay fanomezana avy aminy, hono, ho mariky ny fankasitrahana.
Toa nanjetoka irery teo i Malala, ny ankizy koa vetivety dia resin-tory vantany vao avy nisakafo. Voasasa ny lovia, voalamina ny trano, vita ny fidiovana hariva, nampiasaina ny savony mitsiranoka, ny karazana fanositra amin’ny vatana, ny vy kely mifaraingoka fanalana volo, ny areza. Tapitra nobikaina daholo indray ny karazan’entana novidiana teo, kanefa … ny ora toa … nihisatra. Nikaroka laharana tao anatin’ilay boky kely maintimainty indray izy, nandray ny finday, nanindry marika maromaro…
- “Allo! Allo! Hery ve zao? Manao ahoana ianao?”
- “Salama tsara.”
- “Andray ry Hery izay dia saika tsy noraisinao mihitsy aho.”
- “Aiiy! Tsy henoko re e! Variana niasa aho.”
- “Izay dia raha tsy nafeniko ny laharan’ny findaiko tsy noraisinao aho, tsy te hiresaka amiko intsony angah ianao? sa... efa nahita olonkafa any izato ianao hasolo anay?” hoy izy sady toraky ny hehin'ny fifazivaziana.
- “Fa ianao kosa ve dia efa mihevitra ahy ho inona mihitsy e? Tena be asa be aho ho’aho, marina e!”
- “Alainao aty am-piasana aho rahariva amin’ny dimy?”
- “Izaho anie ry Tahiana mbola aty Mahajanga e! Sady tsy afaka miresaka ela aminao aho fa tena miasa be.”
- “Hay ianao moa mbola any? Tsy tsaroako. Dia na hiresaka vetivety aza ve dia tsy misy fotoana, tsy te hiresaka amiko mihitsy ianao o!”
- “Tsy izany re fa miasa aho e!”
- “Na dia misy vaovao mikasika andry Malala aza dia tsy hiresaka amiko ianao?”
- “An, hoy i Hery nifantoka tampoka tanteraka. Ahoana? Inona no vaovao henonao ry Tahiana?”
- “Niantso ahy i Malala alina. Nanandrana niantso anao foana aho taorian’izay fa tsy nahazo anao mihitsy.”
- “Dia ahoana, inona ny vaovao hono? Nanao ahoana i Alexia?”
- “Efa ho herinandro kay hono izao no niverenan-dRatrema eto an-tanindrazana, fa rahoviana ianao no miverina aty Tana ry Hery?”
- “Amin’ity faran’ny herinandro ity fa tsy mbola azo antoka tsara, na mety ho amin’ny fiantombohan’ny herinandro manaraka. Nahazo vaovao mikasika an’i Alexia ianao?”
- “Izato ianao koa, tsy mba misy fahavitrihana ny hiresaka amiko mihitsy raha tsy hoe ny vaovao mikasika an’i Alexia sy Malala ihany. Tsy dia afaka ny hiresaka lava loatra aho. Mikasa ny hidina any Mahajanga aho izao hariva izao, na rahampitso maraina.”
- “An! Inona no ho antony handehananao aty Mahajanga?” Hoy i Hery tena sadaikatra tokoa
- “Mba hiala sasatra kely no sady manana fikasàna ny hanokatra fivarotam-panafody any izahay, ka hanao ny fandinihana sy fanadihadiana any an-toerana aho. Rehefa tonga any aho miresaka tsara aminao ny mikasika azy efa-mianaka.”
- “Resaho izao re ry Tahiana a! Tsy fantatra na hifankahita akory isika aty na tsia, izaho koa be asa,” hoy i Hery toa nanontany tena ny amin’ny tanjona tian’i Tahiana ahatongavana. Tsapany tsara anefa fa I Tahiana no hany olona azony itokiana fa afaka hanelanelana azy sy Ratrema sy ny ankohonany raha sendra misy ny olana.
- “Miantso anao ihany aho rehefa tonga any e! Rehefa tsy izaho no mandeha dia ilay Dokotera lahy iray miara-miasa amiko ato. Iza no hotely ipetrahanao?”
Tena nitoetra teo anivon’ny fisalasalana tanteraka I Hery. Handroso ho babon’ny hafa, hihemotra ho babon’ny sasany. Niserana tao an-tsainy vetivety ny hoe hiantso any amin’ny biraon-dRatrema avy hatrany fa I Tahiana ity toa mampifilafila, ary sao hitady ny takalom-patsa vidim-pihinana indray avy eo.Ny tahony an-dRatrema koa anefa etsy andaniny nanampy trotraka. Raha nisy zavatra tian-dRatrema ho fantany tokoa mantsy dia efa ho niantso azy Ratrema raha vantany vao tonga. Dia…
Loulou (France) ralouloune@yahoo.fr
Tena hita ho nihatsara tokoa ny fahasalaman'i Alexia. Na dia mbola lalimaso sy vizana tanteraka aza. Ny ferifery nameno ny vatany koa efa tsy dia nanaintaina azy intsony. Ny hidihidy naterak’ireny no somary tsy maintsy iaretany sisa. Vao nigadona kelikely tao ry Mahefa dia injao naneno ny findainy. I Ratrema, nanome ny laharana miafin’ilay nadefasana vola. Nila resaka tamin’i Alexia izy avy eo. Tsy nisy naheno izay resaka nifanaovan’izy mianaka tao, i Malala mantsy nivoaka kely hikaroka izay azon’ny marary atao ody am-bava fo, moa i Mahefa variana tao amin’ny birao natokana ho an’ny mpitsabo, toa nisy antontan-taratasy tsy maintsy nokarakarainy mantsy.
- "Adinoko ny nanontany na masirasira no tian-dry na mamimamy dia samy nitondrako kely avy. Tsara aloha rehefa mazoto homana ianao e! izany ihany no tena iverenan’ny aina haingana. Mba mahery misotro rano ve nefa?" Hoy i Malala toa navitribitrika niverina avy any.
- "Eny e! efa miezaka aho, izay indray i Neny sy ilay rano, rano , rano, rano foana. Sitrapoko ve ry Neny ijanona ato amin’ity hopitaly ity na dia iray minitra aza a! Ataoko daholo izay fomba ahafahako miala ato faran’izay haingana. Oadray, saika adinoko, niantso i Papa teo, ity ny mombamomba ilay vola nalefany hono hangalan’i Neny azy. Mampamangy amin’izy dahy kely koa hono. Toa tsapako nalahelo ery izy na dia niezaka ny nanafina aza. Miezaka mikaroka teny holazaina izany izy nefa tsy mahita lazaina firy, ohatran'ny misy zavatra hafa iasan'ny sainy izany. fantatro miady mafy ery izao ny sainy any. Diso fantatro loatra raha i Papa."
- "Mahareta anaka fa kely sisa. Miandry vava avy amin’ny mpitsabo fotsiny dia hanao ny famandrihan-toerana amin’ny zotran’ny fiaramanidin'i Air Madagasikara aho hodiantsika efa-mianaka. Any indray tohizana ny fitsaboana sisa."
Somary toa nihaotra kely i Alexia vao nanohy ny teniny. Nobanjininy tsara amin'ny fijery miangola ity reniny.
- "Neny a! ahoana ny hevitry Neny raha mijanona aty aho, dia aty no manohy ny fianarako? Efa aty ihany tsinona koa, sady efa izany no faniriako?"
- "An! Avy aiza tampoka teo koa no nahazoanao izany fikasana izany anaka?"
- "Rehefa voafehin’ity rindrina efatra sy farafara ity anie ry Neny dia tsy maintsy lasa lavitra ny saina aman’eritreritra e! Efa noresahiko i Papa teo dia nanaiky izy, hevitra tsara hoy izy."
Aok’izany ny hafalian’ i Malala. Tsy latsak’izany koa ny an-dRatrema. Toa mahita ity zanany afaka tanteraka sahady amin’ny gadran’ny fitiavana an’i Hery. Toy ny tsy vao nizaka fanaintainana mafy ny fony. Fitiavana be toy iny dia adinony sahady tokoa va re?
- "Tsara rehefa mandray fanapaha-kevitra sahala amin’izany ianao ka!" Hoy I Malala nitsiky, sady nandray ny felan-tanan’ity zanany. Fanapahan-kevitra tsy ratsy tokoa, mino aho fa efa nandinika tsara tokoa izato ianao. Dia sehatra mikasika inona no tianao ianarana? Sa ny teny Ankatso ihany no ho tohizana? Tsara rehefa nanaiky rainao, dia tonga dia resaho koa i Mahefa rehefa avy eo, sa efa niresaka koa ianareo?" Toa adinon’i Malala fa tsy mbola mahafantatra ny marina anie ity Alexia. Faly loatra angamba izy noho ity zanany ka zary tsy ho voafehiny intsony ny fipetsopetson’ity vavany.
- "Nahoana moa izaho no tsy maintsy tokony hiresaka amin’i Profesora Mahefa? F’angah miankina aminy izany? Rehefa manaiky ianareo sy Dada dia izay."
- "Eny e!" hoy i Malala toa tonga saina tampoka, nikaroka hevitra haingana hanarenana ilay teo. "Nieritreritra aho mantsy fa afaka mikarakara ny taratasy fiantohana anao aty izy, ny trano ipetrahana sy ny sisa. Sa ahoana hoy ianao?"
Noresahina tamin’i Mahefa avy hatrany tokoa ny fikasan-drazazavavy. Aoka fotsiny ny hafaliany. Afaka hitondra ny anjara fitaizàna ity zanako aho izany hoy izy tany anatiny tany. Satriny tokoa aza hanonerana ny fotoana tsy mba niainany teo akaikin’ity zanany ny andro rehetra sisa iainany. Toa i Alexia no nanjary hany antoka ahavelomany. Toa noho i Alexia dia foiny avokoa izay rehetra sarobidy taminy, eny fa na dia ny ainy aza. Porofo mivaingana ny tsy nisalasalany akory ny hanomezeny taova ho an’i Alexia. Porofon’ny maha olona be fitiavana azy, mbola porofom-pitiavana an’i Vololona, porofom-pitiavan-janaka asehon’i Mahefa. Saingy… porofom-pitiavana anivon’olon-droa, lehilahy manana faniriana mafy ny hifampitantana aminy no… nandraisan’i Alexia azy.
“Endrey izany fikarakarany ahy, tsy adinony mihitsy ny mivily ato amiko manontany sao misa zavatra ilaiko. Endrey izato hery mivoaka amin’izato fijeriny, toa misy faniriana lalina tsikaritro na dia toneny mafy aza. Endrey ny fandinihany ahy, toa ankafiziny ery izato fihetsiko, indrindra moa rehefa misy zavatra ilaiko ka somary iangotiako izy. Dinihiny ery izato firafitry ny endriko, toa satrin’izato masony baliaka horombahina tsy ho ety amiko, hanaraka azy, honofinofisina isaky ny alina. Vao sendra mifanojo ny fijerinay dia, na ahodiny miankavia ny azy, mody mijery iretsy karazan’odin’ny fanaintainako, na aviliny miankavanana mba hitopy etsy amin’iretsy sakafo sy rano fisotroko, na aondriny moramora ny fijeriny, toa itoriany fa resin’ny fitiavana izy, nefa toa mahery loatra ny henatra tiany horesena, noho izato elanelan-taona misy aminay, sy noho ny fifankahazoany amin-dry Dada sy Neny angamba a!” Hoy ny fiventiventin’i Alexia rehefa iny izy lasalasa fisainana mandinika ny manodidina azy iny, babon’ireo fihetsiky Mahefa tanteraka.
Nametrapetraka ny taratasy rehetra momban’i Alexia i Ratrema, nandoa ihany koa ny saran’ny hotelin’izy efa-mianaka nandritra izay fotoana naharitraritra nipetrahany tao izay. Tsy maintsy hanainga hody any antanindrazana aho, hoy izy tamin’ity vadiny. Maro ny asa miandry ahy any, ny eto am-pelatanana koa ity efa miha manify dia manify, vao misy possibilité dia mandefa vola ho anareo aho, arakaraky ny fandehan-javatra any. Nefa aza miasa saina be loatra fa mila anao matanja-tsaina i Alexia, mila anao hampahery mba hahamora ny fitsaboana azy.
Nitodi-doha ho eny an-tseranam-piaramanidina Roissy izy efa mianaka rehefa vita ny veloma tamin’i Alexia. Ny fiaran’i Mahefa no nanatitra azy, ary tovolahy malagasy iray, mila ravinahitra aty, no niangaviana mba hamily.
- "Ratrema a! mahereza izany vady malalako izany, mino aho fa tsy ho ela dia salama tsara ny zanantsika ka afaka hody any izahay, hikarakara anao indray. Marina fa ao ry Zefa mpanampy nefa, an!an! Maninona moa raha maka manampy vehivavy ianao vao tonga any e! hahandro sakafo, hanasa lamba, handamitrano sy ny sisa, amin’izay matoky aho fa ho tsara karakara ianao any, dia milamina ny saiko." Hoy Malala sady nahodiny ny tarehiny hiala ny fibanjinam-badiny azy, satria tsy voasakany ny fiforonan-dranomasony nihazohazo te hilatsaka. Satriny tokoa hanaraka an-dRatrema, na dia noho ilay fahafinaretan’ny nofo niainany farany teo izay aza. Manahy izy sao hanembona any Ratrema ka hitady fahafinaretana hanalefahana ny fanembonana. Ny tenany moa ho aiza amin’ity marary tsaboina, ny zaza roa tezaina? Sa eo i… an!an! manana ny asa maha profesora azy izy, ary inoana fa toerana maro no iasany fa tsy eto Paris ihany na any Madagasikara. Ary araky ny filazany dia noho i Alexia fotsiny no maha-eto azy izao.
- "Aza manahy ianao e!" hoy Ratrema sady mody nihomehy mba hanalefahana ny alahelo niserana rehetra, "izaho anie na dia tsy mpandray ravin-dena aza hatramin’izay mba mahavita ihany e! Eny e! fa hitady olona aho hanampy ahy." Oroka am-panajana teo amin’ny andrina no nifanaovan’izy roa imason’ireto zaza. I Toky moa nisamaritaka fa may ny hijery fiaramanidina, hany ka zary tsy hita taratra ny alahelo ny hifandao.
-" Iry neny misy ngeza be a! ndao ho eny ho’aho! Sa etsy tsika mahita tsara an’i Papa? Iny misy vao tonga…"
Tsy mba afaka niandry ny fiaingan’ny fiaramanidina anefa izy ireo fa vao vita ny veloma dia nanainga hitodi-doha any amin’ny hopitaly indray. Sento tokana no nataon’i Malala, izaho irery izany zao no hitsabo an’I Alexia, handany fotoana, hivizaviza, hitaintaina sy hifi-dranomaso amin’ity tsy naloaky ny kibo akory.
Resin-tory izy mianadahy kely teny ambony fiara, asa, vizan’ny dia nandroso teo koa angamba a! Ao aoriana no misy azy telo mianaka, ilay vavikely eo am-pofoana, somary miankina amin’ny varavaran’ny fiara havanana ny lohany. Ilay lahy kely kosa miankina eo an-tratran-dreniny havia, isaloran’ny sandriny havia avy eo. Renoky ny torimaso, tsy mahatsapa akory ny sangodim-piainana mihatra amin’ireto manodidina azy akaiky. Raha tsy lehibe toa izao tokoa mantsy ny elanelan-taona nisy taminy sy Alexia dia inoana fa mba afaka niaro iry anabaviny izy, nanafay ilay Hery, izay antok’izao tebiteby sy fanaintainana mahazo ny rehetra izao. Nefa inoana koa fa nanana ny tantarany izy ary dia ho hafa tokoa any fizotran’ny raharaha! Ny tongony mikirazorazo tsy mipaika amin’ny tapis-n’ny fiara akory. Ny tanan-keliny havanana somary voatsindriny. Ny iviny amin’io miraraka amin’izato takolaka botabotakeliny havanana, mamonto ny lobaka mavokelin’ity nahitany masoandro, izay tsy mahatsapa akory ny hamandoana aterak’izany amin’ny ilany havia rehetra. Ny nonony havanana miraviravy avy ninonoan’i Cynthia teo, tsy tsaroany na dia ny hampiditra azy haka ny toerany aza. Bokotra iray tamin’ny farany ambany sisa no hany nitazona ity lobaka tsy hisonàka tanteraka. Ny chauffage tao anaty fiara koa moa nandeha ka tsy tsapa ny hatsiaka aterak’izato fanalan’ny ririnina eny ivelany. Somary ailany kely miankavanana ny lohany sy ny fijeriny. Toa sondriana ery mandinika ny hakanton’ny Paris, ny ngoly iainan’ny voahary rehetra. Nefa izao raha anontaniana azy ny zavatra hitany dia ilaza ho tsy nahita n’inon’inona izy. Toa miady saina mafy indray izato fijery azy ka! Nefa raha anontaniana azy izay eritreretina dia inoana koa fa tsy ho hitany izay havaly. Hay izao ilay atao hoe “ se plonger dans le vide”. Ny havizanana mitaky, ny torimaso koa tsy ampy.
Amin’ny antsipirihany no nandinihan’I Tojo, ilay mpamily, ireo rehetra ireo. Tsy tsikaritry Malala na ny nanodinany ny retrovisuer nihantona teo aloha izay fitarafana ny any aoriana hitopy any aminy aza. Mba niady mafy koa ny sainy tany anatiny tany: izany no arrrivage vaovao amin’izany tanàna, tsy mahalala na kely akory aza mikasika an’andafy, na ny fiainan’ny gasy eto aza tsy hainy. Nefa toa karazan’irony zanaka mpanankarena, dia avy eo nanambady mpanankarena. Hein, itony ve tsy hiavonavona? Ssshh, tsy hisintona ny mason’ialahy letsy ra-Tojo no tanjony amin’io nonony io a! sendra mba adinony fotsiny fa vizana izy. Sady toa mifankatia ery izy mivady teo, itony ve tsy irony karazana mpivavaka be, manaja vady, tsy hanaiky izany filan’ny nofo ivelan’ny tokantrano izany mihintsy, eny fa na dia sanatria maty vady aza? Efa Razoky be ihany anefa ilay vadiny teo, dia tsy ho taitra amiko ve ity. Aleo hilamina ka, tsy asiana resaka akory. Aleo zavatra hafa no iresahana. Sao mba ahitana lalana azo anaovana afera, sitran’ny ahay vola, sady olona mahitahita itony. Ny fiainana eto rahateo enjana. Sao samy votsitra eo.
- "Hono ho’aho Madama, tapaka tampoka ilay fahanginana efa ho 30 minitra lavabe teo, nifoha tampoka koa ny sain’i Malala, afaka mijanona hividy zavatra kely vetivety etsy amin’itsy toby fivarotana solika itsy ve isika?
- "Tsy maninona mihintsy ka, nefa aza dia maharitra ela fa tsy maintsy mbola hiverina any amin’ny hopitaly aho azafady." Toa somary mbola nisy avona ihany no fomba namalian’ny Malala azy.
- "Roa minitra raha betsaka ka, hividy pastille fotsiny aho, tsy dia mbola mahatanty an’ilay hatsiaka mantsy na dia efa ho efa-taona aza izao no naha-taty ahy. Misy zavatra ho entina ho anao?"
- "an!an! misaotra," sady somary nitsiky i Malala
Nisokatra ny varavana hivoahan'i Tojo no vao tsapany fa nangatsiaka tampoka ny tratrany. Tsy naka sarotra akory izy nanainga ny nonony amin’ny tanany havia, ny havanana mantsy tsindrian’I Cynthia. Nikarokaroka, nampiditra azy tao anaty kitapo itoerany, nanamboamboatra azy teo mba hipetraka hivoiboitra tsara, toy ny fanaony isan’andro, nanidy ny bokotra voalohany, faharoa, fahatelo, nanakatra ilay châle fotsy mitsoriadriaka mavokely madinika, nahodiny in-droa tamin’ny tendany, avy eo nankifiny any aoriana mba tsy hanitikitika ireto menaky ny ainy. Vita izay dia nisento tokana izy.
Segondra vitsy taorian’izay dia niverina i Tojo. Ampy nandinihan’I Malala azy ny fotoana nivoahany avy ao amin’ilay fivarotana amin’ny tobin-dasantsy, mandram-pahatongany teo amin’ny fiara.
Tovolahy manao endrika Andriamasinavalona I Tojo. Karanarana endrika, zarazara hoditra, somary lava marotsadrotsaka, bingobingo fandeha. Ny masony kely nefa toa mampiseho fa tovolahy sariaka izy ary malefaka. Toa tsara rafitra ny endriny, rakofan’ito volony fohy, ny sangany no miakatra, somary lava kokoa raha mitahy ny any aoriana. Asiany gel kely mba hihazona sy hampamiratra azy. Manao fiakanjona tovolahy matotra nefa tanora. Toa niangaliana izany ny loko ampiarahina. Vao mitopy ny fijery dia hita fa somary lafolafo vidy ihany ireny eny an-kodiny.
- "Ity ny biscuits ho an’izy dahy rehefa taitra, henoko nitaraina noana ihany mantsy ilay bandy kely io teo, sao ianao ho sahirana."
- "Marina tokoa," hoy I Malala, "tena tsy tao anatin’ny saiko mihintsy. Misaotra anao," sady nitsiky izy, toa nampiseho fankasitrahana tanteraka tamin’ny fihetsika nataon’I Tojo teo. Tao anatin’izany, tsikaritr’I Malala fa nitopy indray mandeha kely teny amin’ny tratrany ny mason’ I Tojo. Toa fijery nanao hoe: nankaiza ilay izy teo? Tonga dia nisamboaravoara be avy hatrany ihany ny tao anatin’I Malala. Ary tsy tao an-tsaiko mihitsy, hitany izany ny nonoko teo, eny e! hitany, matoa izy nijery ny tratrako.
Vao tafatombina tsara teo amin’ny familiana I Tojo, dia nifanojo tao anaty retroviseur ny fijerin’izy roa. Vao maika nientana iray ihany ny ambavafon’i Malala.
- "Raha tsy bouchée ny lalana dia afaka 15minitra farafahaelany dia tafavoaka isika."
- "Bouchée ahoana? Ambouteillage ve no tianao lazaina?"
- "Na aty amin’ny autoroute aza ve?"
- "Eny ho’aho, indrindra fa ity mivoaka amin’ny Paris centre ity, matetika mihintsy."
- "Eee! Zay moa mba anarany no hoe tonga aty nefa tsy mba manao vacance fa mitsabo marary. Tsy mba afaka ny hijery tanàna akory."
- "Rehefa misy fotoana kely dia ilazao aho fa entiko mandehandeha ianareo e! aty koa anie ny marary tsy mila ambesana lava sahalan’ny any Dago e! Ny infirmière miandraikitra azy tsara. Sady hoe fianakavian’I Professeur Mahefa izany tsy ho ataon-jareo ambanin-javatra mihintsy. Na rehefa sendra manana olana, na mila olona ianareo aty dia lazao aho, sao mba misy azoko atao."
- "Dia handehandeha amin’ireto forongokeliko anankiroa ireto? "
- "Tsy maninona ka, amin’izay mba maka rivotra koa izy dahy, ny akanjony fotsiny atao mafana tsara."
- "Eny e! fa hafa ihany izany mandeha tsisy ankizy izany. Maro kokoa ny zavatra azo atao."
Gina tsy nahateny Tojo. Inona koa no tian’ity Madama ity ho lazaina? Aza manantena tsy misy leitsy a! Marina ny azy, afaka miantsena, mitety magazay maro kokoa rehefa tsy misy ankizy. Izaho mihintsy koa no toa mitady hanao revin-gadra.
- "Fa inona no ataonao eto Paris? Miasa sa mianatra? I Tojo moa?" Hoy malala nanohy ny resaka fa toa tsikariny tsy nahita lazaina ny tovolahy.
- "Tojo Rahamefison, sady miasa aho no mianatra. Mianatra no tena anton-dia e! fa fantatrao moa Madama ny fiainana tsy mora, hany ka rehefa mahita azo atao dia atao e! Ny ray aman-dreny ny anay na dia any amin’ny tany niaviana aza, mbola mahatsiaro sahirana, maika fa izaho aty amin’ny tanin’olona."
- "Antsoy hoe Malala aho e! aza atao madama izany. Hitako ho tovolahy mavitribitrika aloha raha ianao e! Mino aho fa tsy dia manana fahasahiranana izany ianao eto o!" Hoy Malala sady somary niangoty.
- "Ahoana no ilazanao izany ry Malala?" Sady nihomehy i Tojo
- "Izany no fanombanako anao e! Un homme qui trouve une solution à tout problème, à juste temps. Sa tsy izany?"
- "Mety ho marina izany, raha teto aho aloha… maro ihany izay zavatra efa nosedraiko izay e! fa dia tafavoaka foana ihany aho."
Maro ny resaka nifanaovan’izy roa. Manao ahoana ny olona aty Frantsa, ny fiainana, ny fianarana sns… Tsy ampy hitantaraina ny efa-taona nodiavin’i Tojo raha ny minitra vitsy ambiny teny ambony fiara. Tao ny nampitaintaina, ny nampihomehy, ny adalana majinijinika. Toa nampisy sahady fifankazahoana am-po tamin’izy roa iny 20 minitra niarahana iny. Toa nampisinda kely ihany koa ny aloka nandrakotra ny fiainan’i Malala. Nivantana avy hatrany teny amin’ny Hopitaly ny fiara. I Tojo koa moa milaza fa mbola misy asa kely ataony hono. Fisaorana sy tsiky no nameno ny endriky Malala. Niserana teo imason’i Tojo ny hatsaran’i Malala, ireto fandaingana kely roa nateraky ny tsiky, toa nanjary ravaky ny takolany. Toa tsy mampino hoy izy tany an-tsainy, raha izao bika aman’endrika izao no efa niteraka ilay tovovavy hoe marary ao, toa efa lehibe izy ao raha tsy diso aho.
Notsenain’i Mahefa avy hatrany teo an-dalatsara i Malala sy ny ankizy. Nilaza i Mahefa fa vao avy nomena fanafody i Alexia ka sondrian-tory. Nentin’i Mahefa izy telo mianaka, nony avy niara-nisakafo dia naka ny entana rehetra tany amin’ny hotely. Tapaka mantsy fa any aminy izy ireo no mipetraka mandra-pahavitan’ny fitsaboana. Nisaotra an’i Malala i Mahefa noho ny fitaizany an’i Alexia hatramin’izay. Tena be herim-po sy herin-tsaina tokoa izy hoy i Mahefa, hany ka tsy dia manano-sarotra ny fitsaboana azy. Nilaza i Malala fa i Vololona no notahafiny. Raha nandatsa azy ny fianakaviana tamin’izany fotoana izany, hoy i Malala, hoe bevohoka tsisy ray, tao aza no niteny hoe alao io zaza io fa ho velomin-dry amin’ny rano mangatsiaka ve, tsy mba nanaiky izy fa dia nijoro foana, na dia sahirana aza izahay tamin’izany. Nanahy mafy aza aho tamin’izany sao hisy fiantraikany amin’ny fahasalaman’ny zaza ny adi-tsaina nianjady taminy. Nipoitra moa Ratrema avy eo dia mba somary nilamina, ary tokony ho nilamina tanteraka mihintsy, saingy indrisy, fantatrao ny tohiny.
Somary tsy dia lavitry ny centre ny trano nipetrahan’I Mahefa. Irony appartement irony. Aza mihafahafa, hoy i Mahefa, ataovy toy ny any aminareo, dia lasa namonjy ny any ampiasana indray izy. Vao miditra dia efitra iray lehibebe izay sady fisakafoanana no fandraisambahiny. Mifampiankina aminy eo ny lakozy. Lalantsara kely kosa no manelanelana ny efitra fandriana roa mifanatrika. Ny iray nisy an’i Mahefa, ny iray kosa handrian’izy telo mianaka.Ny efitra fidiovana kosa no mamarana ilay lalantsara. Tonga moa dia hita taratra fa lehilahy no ao fa mikorontana izay tsy izy.
Nandamindamina avy hatrany ny entana i Malala, ny ankizy koa sady nilalao, hany ka vetivety dia maizina ny andro. Teo am-pampatoriana ny ankizy izy no injao nitopy tamin’ny tontolo androny androany ny sainy. Ny veloma nifanaovany tamin-dRatrema, ny resaka nifanaovan’izy sy i Tojo, dia avy eo vao niserana tao an-tsaina ilay bika aman’endriny, ilay famindrany, ny fijeriny, ny fihetsiny. Tena nankafiziny tanteraka ka somary nitsiky irery teo izy. Tiany ho toherina anefa ny fakam-panahy, izay efa naharendrika azy foana hatramin’izay. Tsapany koa fa miserana fotsiny izao revorevony an’i Tojo izao. Hitsabo marary no anton-dia. Nitsangana izy. Naleony nandamin-trano toa izay ho voagejan’ny fitsiriritana eo indray, eny fa na dia efa akanjo mandry aza no teny ankodiny. Tsapany koa fa tsy nisy fisarihana azy mihintsy nataon’i Tojo fa dia fihetsika sy resaka tsotra fotsiny, nanala lalana angamba.
Nalaminy ny tao an-dakozia, ny efitra fihinanana, eny nataony hatramin’ny efitranon’i Mahefa aza. Vehivavy koa moa ka sady nandamindamina no nikarokaroka, sao mba hahalala zavatra bebe kokoa mikasika ity Mahefa ity. Tao anatin’ilay tiroir an-doha-pandriana tokoa, no nahitany sary maromaro. Nisy sariny taloha, tsaroany tokoa ilay endriky Mahefa tamin’izany fotoana. Nisy sarin’izy sy Vololona miaraka, tsy vitsy koa ny sarin’I Vololona irery, mbola voatahiry tao. Namadika ihany Malala sady nanjetoka nahatsiaro ity rahavaviny. Tampoka anefa, nisy sarim-behivavy hafa, mitokana, lava volo ary toa mbola tanora endrika, toa vao haingana koa ny fijery azy, nodinihiny fa tena tsy fantany. Raha mbola teo am-pandinihina ilay sary tao an’efitra tao indrinndra izy, noho injao Mahefa niditra tampoka, nanana ny fanalahidy rahateo moa izy. Saika hamonjy hivoaka i Malala nefa, nakatony ny tiroir dia naleony mody namonjy nipetraka haingana. Efa tena alina moa ny andro ka nijaikojaiko Mahefa niditra tao anefitra rehefa avy nanala ny menteau-ny, mba tsy hanaitra ny sasany. Taitra izy raha vao nahita an’i Malala tao anefiny.
- "Ngah’ ity ianao tsy mbola matory?"
- "Nandamindamina aho," hoy I Malala, sady toa menatra koa ny hoe sao tsikaritry Mahefa izy nisavasava teo, hany ka tsy hitany izay lazaina, "dia … dia sady miandry anao."
- "Tsy vizana?" hoy I Mahefa sady nisafo ny takolaky Malala havanana.
Toa nidika zavatra hafa tamin’I Mahefa ny teny sy fihetsiky Malala. Izy koa nipetraka teo amoron-tongotry ny farafara, ny akanjo teny aminy irony fitondra matory malamalama hatreo ambony lohalika irony. Tady kely no mba tanan’akanjo, hany ka toa vao maika nampivoitra ireto nonobe, toa miandry fotsiny ho pondesina. Natsipin’I Mahefa tetsy ambony seza ny kitapo teny aminy, nitingitingina izy ary nanomboka nanoroka an’I Malala. Sadaikatra i Malala: tsy izao mihitsy no tanjona tiako ahatongavana, nefa tsy sahiko ihany koa ny hanosika azy, sao ho gaga eo izy. Somary nahodiko ihany ny lohako, toa mbola any amin’ilay sary teo ihany ny saiko, nefa rehefa nosarihiny tamin’ny tanany havia ny lohako hifanatrika aminy, dia noharoniny tamin’ny lelany ny aty vavako, dia mba renoka ihany koa aho nampifanjevo ny lelako tamin’ny azy. Notsoahiny ny palitaony, notsetsatsetsafiny ny tendako, ny tanany namaha ny lobakany. Ampy naha-mando ahy tanteraka izay fihetsiky Mahefa izay. Hany ka nampiako izy hanala tanteraka ilay lobaka teny aminy. Somary natosiny moramora aho avy eo handry tanteraka amin’ny farafara. Nampifampikisininy ny tongony roa mba hanalany ny kirarony. Henoko ny fidoboky ny kiraro tamin’ny gorodona, ny iray aloha, dia avy eo ny koa faharoa. Toa vao maika nampiakatra ny faniriana tato anatiko. Somary nitambesatra tamiko izy ka tsapako ny firidiridin’ny filahiany. Toa may tampoka izany aho, nefa izy nandamina tanteraka, na dia efa tsapako aza ny fahavononany. Somary nobatainy aho hiakatra kokoa, hamonjy ny loha-pandriana, nihorirana teo an-kavanako izy avy eo, natohony tamin’ny tratrako ny molony, nanorokoroka, ny tanany natetiny ny vatako hikaroka ny faritry ny fahasambarako. Ningaiko ny maojako, tonga dia fantany fa tiako raha ahidiny ny silipoko, dia avy eo natosiko tamin’ny tongotro mandra-piala azy tanteraka. Nasamako amin’izay avy eo ny feko, niandry ny azy aho, kanefa izay nahasambatra ahy ihany no nataony, injao fa tsapany ny bokotro, nopotseriny, nihika kely indray mandeha aho, ary tsapako tena nahasambatra ahy ny rantsan-tanany efatra. Niezaka ny niarina aho avy eo, eny fa na dia mbola nisefosefo fatratra aza, notakariko tamin’ny molotro ny molony, natsipiko ny feko ankavia hisadika aminy avy atsy amin’ilany, niarina aho ka tafapetraka teo amboniny. Nitsikiko izy sady novahako ny patalohany, no sady nihetsiketsika madinidinika aho. Nientana sahady indray ny tao anatiko. Tsiky koa no navaliny ahy. Akory anefa ny hatairako, izao ve no nanonofy sa inona ilay tsapako nihenjana be teo?
Tsikariny angamba ny fahatairako sy ny fahadisoam-panantenàko, ka hoy izy:
- "Malala a! reraka aho, mafy be ny asako androany."
Toa tsapako nivoara-mena tampoka izany ny endriko, satria toa namaivay be tany anaty lohako. Nahatsiaro ho nitafy henatra aho, niala moramora,
- "izany ve?" Hoy aho toa diso fanantenana.
- "nisy opération tao dia ora maromaro mihitsy vao vita nefa izao mbola atahorana ny ain’ilay olona."
Somary nirintona i Malala niverina nitsilany,
- "mangalà aina ary e!" hoy izy nanome lamosina, toa tsy sahy hijery ny tavan’i Mahefa. Nosafoin’ity farany ny sandriny. Izay angamba no hany heveriny hanalefahana miadana ilay fanirian’i Malala teo.
- "Mijanòna matory eto akaikiko an!"
Tsy namaly Malala, nifangaro tao aminy ny henatra sy hatezerana. Ny hiaka kely nataon’i Cynthia nivadi-mandry no toa niandrasany dia nitsangana haingana izy, nilaza fa raha taitra kely ny iray amin’ireto zanany ka tsy mahatsapa azy dia mitomany. Adinony na ny nizaha ilay silipony aza.
Efa hadiva haraina i Malala vao sondrian-tory. Tsy nisy irim-pahazavana rahateo tao an’efitra na dia kely monja aza, eny fa na dia efa nijaridina nampisasaka roa mitovy ny famantaran’ora aza ireto fanjaitra fohy sy lava mihaona eo afovoany. Toetry ny ririnina a! manome vahana ny alina mba hanjaka. I Toky naka zoron-drindrina no mitsetsitra mafy izato ankihibekeliny. Toa mahazo fahafinaretana lalina ery izato izy. I Cynthia mandry eo afovoany, mitsipaka ny lamba volon-tany ikambanany amin-dreniny ny tongony havia. Mamelatra ny fekeliny, tsy manahy ny amin’ny mety ho tsiro sy fanaintainana ho tsapany any aoriana. Izato reniny miamboho azy, mamoaka ny sandriny havia tsy ho voakajen’ny lamba irakofany. Raha iny mbola renoka iny indrindra izy no injao nisy nandondona ny varavaran’ny efitranony. Sady niditra i Mahefa no…
- "Malala a! Malala!" Nanozongozona ny sandrin’i Malala, nanolotra ny finday, Ratrema miantso anao, tonga soa aman-tsara any antanindrazana izy, indro raiso fa te hiresaka aminao izy. Tsy nivoaka i Mahefa fa niandry teo, toa te haheno izay resaka ifanaovanizy mivady.
- "Allo!" Somary mbola tena ny nihisatra ny hisokatra ny vavany.
- "Malala a! mbola matory be ngah’ ianao? Aty efa amin’ny valo."
- "Alina be aho vao natory ka tena mbola tao anatin’ny torimaso tanteraka no notairin’i Mahefa"
- "Alina be e? tany amin’ny hopitaly sa…sa naninona? Tsy tiany ho tsapan’ity vadiny ny mbola tsy fahatokisany azy tanteraka, eny fa na dia nifona sy nilaza ho nanenina aza izy, ka notihizany hoe:
- "misy inona? Sa naninona i Alexia?"
- "an!an! tena efa mihatsara be i Alexia fa aza manahy ianao, ilay vao manavao trano aho dia saika tsy nahita tory fotsiny. Ka manao ahoana ny any izany tiako izany?" Somary nialona kely Mahefa, niodina nivoaka namonjy ny efitranony.
- "Tamin’ny efatra ora sy sasany no nigadona ny fiaramanidina. Efa aty am-piasana aho izao miantso anao izao. Milamina tsara ihany ny aty fa tsy maintsy miasa be aho. Haka vola aho, sady hiresaka amin’ny PDG-n’ny orinasa avy eo, vao vantany vao azoko izay dia alefako any aminao amin’ny alalan’ny Western Union."
- "Tsy dia maika be anie izany Ratrema e!"
- "Tsia, tsy tiako mihitsy ianareo hanana fahasahiranana ara-bola any lavitra any. Ny miantehatra be loatra amin’I Mahefa koa manahirana ihany. Lehilahy mba manana azon-damosina ihany ny tena. Na zanany ara-biolojika aza I Alexia, mbola adidiko sy andraikitro satria zanako, zanako, zanako."
Nony vita ny resaka dia nitsangana hanatitra ny finday any amin’I Mahefa i Malala. Tsy nisy na dia fisaorana aza nivoaka ny vavany, nefa toa fanahy iniany naseho fa faly izy satria niantso azy ny vadiny, tsy nanadino, ary tsy mbola nadiso fanantenana azy. Tsikaritry Mahefa izany fihetsika izany.
- "Hiaraka hanainga isika afaka ora roa eo na mahery kely hijery an’I Alexia a!" Azo aterina atsy amin’ny jardin d’enfant atsy ny ankizy.
- "F’angah’ tsisy taxi aty? Aleo aho handray taxi dia any mifankahita."
Izy nihodina hamonjy varavarana ivoahana iny no nosarihan’I Mahefa tamin’ny sandriny.
- "Malala a! tena tezitra amiko ve ianao? Ialako tsiny be dia be raha toa ka iny nitranga alina iny no naha tezitra anao tahaka izao. Nefa tsoriko fa tsy azoko mihitsy hoe iny ve dia hahatezitra be na dia inona aza? Tsy fidiny ahy anie e! Tsy fanahy iniako, sa misy inona. Miaraka mankany fotsiny anie isika e! any aho dia any miasa tsy afaka ny hanatitra anao hiverina, sady izaho no mpitsabo mpiandry raharaha anio alina ka tsy afaka ny hatory aty koa."
Vao maika toa nampisendaotra an’I Malala izay fehezanteny farany izay.
- "Nahoana ianao no mandainga ry Mahefa?" nalefaka ihany anefa ny feony na izany aza. "Inona no naha vizana anao? Lazao ahy fa aza mandainga, dia hoa aiza koa ianao anio alina fa tsy marina izany hiandry raharaha izany. Lazao ny marina. Manana ny fiainako aho, ary tsy misy idirako ny anao, saingy aza mandainga. Rehefa tsy misy faniriana any aminao dia aza mikasika ahy fotsiny, tsotra be."
Gaga ihany Mahefa amin’izato hasiakan’ity vehivavy niangolangola fiteny hatrizay.
- "Malala a! aza tsiny marina e! henoy aho fa ho lazaiko anao avokoa." Sady nosarihiny hipetraka teo amin’ny farafara i Malala. "hihaino ahy ianao?"
- "Ento ny teninao e! nefa raha misy fikasaina handainga dia aoka"
- "henoy aho ho’aho, lazaiko anao ny marina. Matahotra aho , matahotra ny mety ho tohin’ny fianaiko aho. Faly aho noho ny fananako an’i Alexia anilako ankehitriny, ilay sombin’ny aiko ary koa sombin’ny ain’i Vololona, ilay tompon’ny fitiavako. Avy niresaka taminy aho omaly, dia tena nahatsiaro an’i Vololona tanteraka, na ny endriny, ny fijeriny, ny firesany, kanefa zanako izy, zanako, ary ho tiaviko toy ny ray mitia ny zanany rehetra." Nisento tokana i Mahefa avy eo, saingy tsy dia niditra tao an-dohan’i Malala loatra, ny fanazavana toa nandrasany mantsy dia ny mikasika ilay sary. Hany ka tsy nahandry izy ka nitsatsaingoka:
- "Eny e! zanakao i Alexia tsy misy mandà an’izany fa avy eo, inona no nataonao avy eo?"
- "Araky ny nifampiresahanay sy Ratrema dia mbola tsy fotoanany izao hanamborahana amin’i Alexia ny tena marina, mafy ihany izay nahazo azy nifanesy faraparany teo izay, nefa ny fihetsiny…"
Navelany ho lasa ny segondra dimy vao nanohy izy:
- "toa nibosesika te hivoaka avy ao am-bavako ny teny hoe izaho no rainao, ray niteraka anao mba ho ren’izato sofiny, te hamihina an-janako mafy aho."
- "tsapako sarotra tokoa ny toerana misy anao, fa avelao handeha ny fotoana dia ho hitanao fa hilamina mora foana io. Tovovavy tsotra raha i Alexia, tia olona, manana fandeferana, ary “compréhensive”. Minoa ahy ianao, fotoana fotsiny no andrasana. Dia tohizo fa miheno anao aho, avy eo ianao nankaiza?" Hoy i Malala toa nandondona.
- "Saika tonga aho dia hamonjy fodiana taty, tamin’ny enina ora hariva teo, nefa natahotra ny fakam-panahy niandry ahy ato an-trano aho, izay fantatro fa tsy maintsy haharendrika ahy, dia naleoko niandry taratara mba hoe efa matory ianareo vao mody, kinanjo…"
- "Mahefa a! Tsy vao voalohany anie akory iny alina iny e! sady tsy azoko mihitsy."
- "Malala, tsy mbola niverina tanteraka ny aiko taorian’iny fandidiana natao iny ary…. nahatsiarovako loatra an’i Vololona i Alexia, ianao koa toa mitondra ahy tanteraka ho eo anilany, ny feonao, ny famindranao, ny halaman’ny hoditrao, ny fanafosafonao, ny fihetsikao mitia. Eny manana mihoatra noho i Vololona aza ianao satria matotra, efa anananao ny fahaiza-manao rehetra. Tsara taiza ny zanako.Toa mitady ho babonao ny foko ry Malala. Nefa ho heloko izany, ho tsiniko eo anatreha-janako. Manambady ianao ary, hitako taratra ny fitiavanao ny tokantranonao. Ny hasambaranao, ny fireharehan-dRatrema, tsara andefimandry, arahin-jazalahy sy zavavy, ireto ankizy tsara taiza, tsara aro, toa voafehy anaty fefy tsy ho sarangotin’ny hetraketrakin’ny tany sy raolombelona.. Ny anjarako, ahy. Izao angamba no ratsy vintana. Hany heveriko ho vahaolana, mandositra mba tsy ho rendrika. Tsy te hanimba ny fahasambaranareo aho, nefa koa tsy te hampijaly tena, …
Tsy marina ny hoe miasa aho anio alina fa, te hiala anao fotsiny, tsy te hitsiriritra anao aho mandritra ny alina. Nikasa ny hanao famandrihana amina hotely iray aho anio."
Tsapan’i Malala fa lehilahy be fitiavana ity manoloana azy, ary ankavitsiana no toa azy. Nobanjininy i Mahefa, notorahany tsiky malefaka. Toa velona tao aminy indray ilay fireharehana fa misy lehilahy solafaka aminy. Niverina ny fahatokisany ny tenany fa tsara izy, manintona lehilahy, tsy sembana ho azy amin’ny fambaboana lehilahy, na zatovo io na zokinjokiny, ny zaza roa efa naloaky ny kibony. Natoky ny filazan’i Mahefa tanteraka izy, nino izy fa tsy nisy lainga, saingy…. tsy ampy.
- "Mino anao aho Mahefa saingy…, sady somary niangoty indray izy toy ny fanaony hatrizay, misy zavatra tiako ho fantatra raha tsy ho tsiniko."
- "Mihaino anao aho, inona no tianao ho fantatra?"
- "Nilaza tamiko ianao ry Mahefa indray andro iry hoe taorian’i Vololona dia izaho no vao vehivavy niarahanao nandry indray. Efa nolazainao tamin’izany io fitovizako amin-drahavaviko io."
- "Marina izany, tena marina, minoa ahy."
- "Lazao ahy ary ry Mahefa , iza ilay sarina tovovavy lava volo ao anaty tiroir-nao ao."
- "Hay hitanao tao?" sady somary nitsiky Mahefa, nampiseho ireto kentrona efa manomboka miha-mahazo toerana amin’ny andriny. "Tovovavy tsotra, sady malefaka tokoa raha io tovovavy io."
Nisento lalina indray izy. Isaky ny misento izay Mahefa dia toa hitantara zavatra sampona foana, tiany atao nefa tsy vitany ny manatanteraka azy noho izy toa olon’ny moraly loatra. Rehefa tsy ataony nefa, toa milentika lalina ao am-pony ny nenina. Zary lanin’i Malala tsianjery sahady ny toetrany nandritra izay fotoana fohy nifampikasohany izay. Toa velom-pialonana sahady nefa izy, satria toa feno fankasitrahana sy fankafizana anaty izato fomba namaritana voalohany nataon’i Mahefa ity tovovavy. Na dia teo aza anefa izany fialonana niforona izany, dia toa resin’ilay fitia te hahalala ny tsiambaratelo’ny hafa tsotra izao. Nitsangana izy, notarihiny ilay seza somary niankin-dridrina, najanony manoloana ity tovolahy toa ho be ambara nefa mikaroka izay teny avoaka. Nitombina teo ambonin’ilay seza i Malala mba hifanatrika tsara amin’i Mahefa. Toa nidika ho fahavononana tanteraka hiaino izay hambaran’ity farany ny fihetsiny. Ny ora koa moa vao nisompirana kely niankavanana tamin’ilay teo fotsiny ilay fanjaitra lava be ka tsy nisy nahamaika.
- "Mbola tanora tokoa Ramatoa kely io." Hoy i Mahefa nanohy ny teniny, "tovovavy malemilemy paika hoy aho mantsy anao teo, malefadefaka fiteny, tsy miavona, nefa koa manaja tena. Nananany tokoa raha ny endrika, ary nampierika mpandalo raha ny bika. Nanaraka fiofanana tany Etazonia aho tamin’ny taona 2002, amin’ny maha mpitsabo ahy. Tany no nahafantarako azy. Mpianatra ho mpitsabo izy tamin’izany, ary tao amin’ilay hopitaly nisy ahy no fanaovan-dry zareo mpianatra fampiharana. Tonga moa dia mandeha vetivety ny resaka tamin’izy samy mpianatra fa misy Profesora malagasy koa ao amin’ny hopitaly. Nanao izay hanantonana ahy izy. Vitsy mantsy ny Malagasy tany hany ka samy miezaka ny hifandray avy hatrany izahay raha vantany vao nifankahalala. Ankizy isan’ny tena naranin-tsaina tokoa izy raha samy mpianatra tao. Hany ka nanjary lasa mpianatra tian’ny profesora vazaha rehetra. Tsaroako mintsy ny fomba nanononan’ilay profesora iray izay ny anarany, anarana gasy notononina tamin’ny teny anglisy, toa mitambolombolona anaty vavany izany ny lelany rehefa manonona ny “r”: Miss* Ramisarivo," hoy i Mahefa sady nitsiky. Toa toy ny niverenany niainana mihitsy ilay fotoana tamin’izany.
- "Tsy nisalasala izy nanontany ny hevitro mikasika izatsy na izaroa, indrindra moa fa rehefa misy olana kely. Isaky ny tojo fahombiazana izy, dia izaho no ampahafantariny izany alohan’ny rehetra. Ny fahaizany mankasitraka avy eo rehefa avy manampy azy aho, eny fa na dia toro-hevitra kely fotsiny aza dia nankasitrahany aoka izany. Itondrany fanomezana kely, na entina misakafo, na misotro kafe fotsiny. Tsy mba nisy lafo vidy, kanefa tsapako fa tena avy tamin’ny fony ireny ka tena nahasambatra ahy. Toa nozariny tamin’izany fomba fiaina mendrika maha te hidera izany aho, hany ka toa nisarangotra taminy. Nifangaro be ihany anefa ny fientanana tato anatiko. Ny saiko nanaiky izay rehetra nataony, niezaka koa nikaroka izay fomba rehetra anampiana azy, nefa toa tsy ny saiko koa io nisarangotra io. Ny vatako, naveziveziko tatsy, natotototoko taroa mba ho eo foana raha misy ilany azy, saingy toa tsy nisy naniry azy ny rantsana rehetra tety amiko, eny fa na dia singam-bolo iray tamin’ny vatako aza tsy mba nisy nitsingana. Ny foko no nankasitraka izay rehetra momba azy nefa… toa tsy ny foko io nisarangotra io. Tovovavy mbola nadio tanteraka izy, kanefa tsy mba naniry ny higoka ny tsiron’izany fisantarana fantsona mbola nisarom-boaly izany na ny rantsana faha iraikambin’ny foloko aza. Toa tsy ho sahiko na ny hieritreritra akory aza, ny hamaky ka handratra, sy handoto izato fantsona toa efa nokojainy sy narovany fatratra, indrindra nandritra izato fahatanorany, fotoana anjakan’ny fakam-panahy."
- "Tovovavy tonga lafatra sahala amin’izany ity izy koa inona indray izato sampona tany aminao ry Mahefa," hoy i Malala toa nandrabiraby. "Ianao koa ity toa tsy hita be ihany. Ny tanalahy aza ry Mahefa na dia mandroso mihemotra eo aza toa mba tonga amin’ny tanjona tiany ahatongavana ihany a! ka ianao indray, tsy vitan’ny hoe sady mamindra toy ny sokatra fa mbola miverin-dalana indray rehefa tonga amin’ny dingana farany tsy ahatrarana ny tanjona."
- "Tonga lafatra hoy ianao, tena lafatra tokoa. Tsy nisy azoko nokianina taminy. Saika hampakatra azy tokoa aho ry Malala. Izy koa mino aho fa hanaiky ny ho hampakariko. Saingy samy nahalala izahay fa tsy kilalao ny tokantrano fa ilàna fo mitempo fitiavana feno avy amin’olon-droa. Tsy ampy ny firaisan-tsaina, fifandeferana lalina, finiavana niraisanay. Toa nisy ezaka maro, na avy aty amiko na avy any aminy, ny mba hitsirin’ ilay fitiavana tsy hahasambatra anay nefa indrisy, toa nadamoaka."
- "Dia tsy mba tsikaritrao akory ve hoe inona no tena antony e! Sa ny elanelan-taona nisy taminareo?"
- "Tsia, tsia dia tsia," hoy Mahefa toa natoky fatratra ny tenany, nandritra ny nifampikasohana dia tsy hita taratra mihitsy fa nielanelana be ny taonanay, na tamin’ny zavatra niaraha-nanao na tamin’ny resaka nifanaovana, tsy nisy olana. Saingy…. toa mbola nanantena mafy ny hisian’ny fihaonako amin’i Vololona aho, mbola nino tanteraka fa tsy maty ny aminay. Izy koa… toa tsy misy fitserana izato fotoana very, toa vao maika aza nivonona ny hamela ny taona maro handalo, mandra-pahitàny indray izany olon-tiany, olona hany mba nitempon’ny fony fitiavana, nefa dia nosarahin’ny fialan-tsasatra. Nanantena ny mbola hifankahita nefa indrisy. Zary nokobonina tao am-po ilay fitiavana, nanao andraso andraso lava. Noeritreretiny ho fitiavana fahazaza mandalo fotsiny ihany, kinanjo, fito taona no efa lasa, toa vao maika niorim-paka lalina dia lalina, hay hatramin’ny fony fahakely mbola nilalao kanety no efa nitsirin’ny fitiavana tao anatiny tao."
Toa nanjetoka kely ery Mahefa nitantara azy. Feno fitserana izato tovovavy sy ny tantarany ny feony. Ny volom-bava mitady hitsiry no hany sisa nosafoiny. Tsikaritry Malala izany ka somary somary nikaroka hihomehezana izy handroahana ilay aloka niserana tamin’ny endrik’ity ankafiziny nefa toa tsy tiany.
- "Hanky va re e! toa mahavaky fo izato tantaranao ry Mahefa. Ary ahoana koa moa no ninoanao marina tokoa fa nadio izy? Amin’izy izato efa firy amby roapolo taona? Tsy hainao izay nafeniny tao anaty zipo lavabeny tao?"
- "Andray izato ianao ry Malala! Tsy ny taona ihany anie no mitondra ny filàna e! Marina fa misy ny tsirim-pientanana sy filàna ary ny fiovan’ny toe-batana ateraky ny fitombon’ny hormone, izay miovaova koa arakaraky ny taona. Fa eo koa ny fo ilaina mitempo fitiavana aloha, ho an’ny ankabetsahan’ny olona maro io, mba hanampy ny fitomboan’ny faniriana ary mba hahatonga lafatra ny fanataterahana ny filàn’ny nofo. Ary ny tena adinonao dia ny fisian’ny saina izay afaka mifehy tsara io filàna io. Na mitsiry ao anatin’ny olona iray aza ny filàna dia ny saina no mibaiko ny ny fihetsika. Ny saina no mitondra an’io, io no tsy hitovizan’ny olombelona amin’ny biby, mba ho baikon’ny saina fa tsy ho sanatria baikon’ny filàna."
Tsy nahateny i Malala fa nihatokatoka fotsiny. Toa nahatsiaro ho nanidrona azy ilay tenin’i Mahefa teo. Tsapany anefa ny fahamarinany, ary na izy aza mahalala fa azo toerina ny filàna, eny fa dia ireo efa naharendrika azy hatramin’izay aza, azony notoerina raha toa ka… tiany notoherina.
- "Tsy misy tokoa aloha ny sahala amin’io vehivavy io raha izany fitantaranao azy izany e! mety ho iray ao anatin’ny arivo." Hoy izy sady nitsangana. Handeha handro aho dia hikarakara ny ankizy. Miara miainga isika ho any amin’i Alexia a! Dia aleo aho hanao sakafo maraina aloha vao mandeha e! dia tonga dia aterina any amin’izany toerana izany ny ankizy. Any koa aho dia atoronao ahy ny toerana angalana ny vola izay halefan-dRatrema. Hividy finday koa aho mba ampiasaina. Mba te hanararaotra hijerijery magazay koa aho rehefa misy azo ametrahana ny ankizy ihany …"
Ny hazavan’ny varavaran-kely nitaratra tany amin’i Hery no nampiodina azy teo ambony fandriana. Nosokafany kely ny masony, nitsirempirempy, kanjo….
Niarina kely ny lohany, tsy nisy afa-tsy izy irery sisa no teo ambony fandriana. Notsapatsapainy, tsy nisy olona mihitsy teo, ary mety vao haingana no lasa. Tsy ho nofy kosa aloha ilay alina e! hoy izy sady nakipany ny lamba nirakotra azy dia nitsangana izy. Noraisiny ny akanjony dia lasa izy nankao amin’ny efitra fandroana. Nihevitr'izy fa mety ho hitany tao i Mihary saingy indrisy fa foana ny tao. Farany, nivoaka ny efitranony izy ary nandondona tao amin’ny efitra ilany. Tsy nisy namaly aloha. Afaka kelikely vao naneno ny famoaham-baravarana, iny lehilahy mbola manao akanjo mandry iray no nivoaka tao, gaga be i Hery. Fa inona ity?
- "Azafady Ramose fa, angaha moa tsy ato ny efitra fandrian’i Dr Mihary?" hoy i Hery.
- "Dr Mihary? Tsy azoko mihitsy ny tianao hotenenina ! Tsy misy izany ato ka!"
- "Ka izaho aza ange tena niditra tato mihitsy omaly e!"
- "Tena miala tsiny Ramose fa tsy misy izany ato an!" hoy ilay Rangahy, sady nakaratony ny varavarana.
- "Fa lasa aiza i Mihary, fa ahoana koa izany? Izaho ve no matory atoandro sa…"
Iny izy saika handondona fanindroany iny no nisokatra ilay varavaran’efitra ilany sady nisy nivoaka tao, niantso an’i Hery.
- "Hery ! avia aty fa inona no ataonao any?"
- "Andray ry Mihary, tena very tadiny aho, afa-baraka marina."
- "Ianao ity an ! ianao ve dia ho tratran’ny tamberin-tany mihoatra noho izaho aty."
- "Aleo aho aloha hiditra, sady menamenatra ihany ny tovolahy, vahotra be koa aho tsy nahita anao teo ambony fandriana teo, dia mety nampikorontana ny saiko."
Niditra ny efitr’i Mihary i Hery, boky roa sy antontan-taratasy maromaro no teo ambony latabatra. Niverina namonjy ny zavatra nataony i Mihary.
- "Tsy maintsy manomana ny famelabelaran-kevitra hataoko rehefa avy eo aho dia izay no nahatonga ahy niverina tato. Mandamina izay porofon-kevitra entiko manohana ny asako."
- "Hay, efa natahotra be aho mantsy nifanena tamin’ilay lehilahy teo. Loza izany."
Tsy nisy niteny intsony fa i Mihary variana namaky ny firaiketany, i Hery naka fandriana, ary rehefa kelikely dia nitsangana izy, nivoaka ny efitra, toa tsy noraharahian’i Mihary akory.
- "Izay izany ilay hoe manam-pahaizana, rehefa mifototra amin’ny zavatra iray ny saina dia mifantoka tsara, ny anio no atrehina. Hahita ialahy ry Hery miaraka amin’io Mihary io. Tadidiko tsara i Mihary ilay nanampoaka entona tamin’ny simia tany am-pianarana fahiny. Tia fanandramana. Nitsoka nivoaka ny trano daholo izahay, izy aza saika nifamonjena tao.
Niverina i Hery afaka fahaefa-kadiny sady nitondra ny sakafo sy ny dité mafana ho azy roa. Nijaikojaiko moramora, tsy ren’i Mihary akory. Ity farany mbola manoratsoratra eo ambony taratasy, tsy mahatsiaro izay manodidina azy.
Farany, napetrak’i Hery teo ambony latabatra ilay vilia lehibe fisaka nisy ny sakafo. Nanoroka mora ny tarehin’i Mihary izy sady hoy izy hoe raha noana anie ny kibo ry Mihary ka hivezivezy ny fanahy eh.
Nitsiky kely fotsiny i Mihary sady namaly moramora hoe:
- "Manandrana manova ahy an!"
- "Ilaina foana ny fanombohan’ny zavatra rehetra."
Tamin’ny fihetsika tsotra dia tsotra no nisarihan’i Mihary ny lohan’i Hery hifanoroka aminy. Nakipiny ny masony, naka fitiavana vaovao.
- "Misaotra betsaka ry malalako, hoy ity vehivavy. Sady hita miran’endrika ery izy notoloran’i Hery ireto sakafon’ny nofo."
Dia niara-nihinana teo izy roa sady nifampanontany, nifanakalo hevitra.
Niaraka nandray fandroana sy namerina indray ny safosafo sy ny oroka mamy rehefa avy eo. Toa hita hoe nifankatia tokoa ary nigoka ilay fitiavana vao niverina nandrobona indray.
Afaka ora roa taty aoriana dia indreny lehilahy iray sy vehivavy iray namonjy ny lapan’ny tanàna, i Hery no mitondra ny fiara, i Mihary eo akaikiny eo mitafy fitafiana mihaja, manara-damaody tsara, nahafatifaty ny fijery azy. Tsotra, nefa tena mametraka ny maha-mpitsabo azy.
Nandeha ny famelabelaran-kevitra nataony teo anoloan’ireo manam-pahefana sy mpitsabo maromaro, variana avokoa ny rehetra, nihaino, nandray ny hevitra aposak’ity manam-pahaizana manokana momba ny fananahana sy ny reny bevohoka. Nandeha ny fametrahana fanontaniana, nahafapo avokoa izay valiny nomen’i Mihary.
Anisan'ireo nanatrika teo koa i Hery. Nangilan-tsofina tsara, mankafy, mitsiriritra ity ravaka efa eny an-tanany. Nanomboka niha-nahazo vahana tao am-pony ilay fitiavany voalohany. Tahaka ny misy lalana vaovao misokatra eo anoloany, lalana milamina, nefa etsy amin’ny ilany, lalam-potaka mandrevo sy mila handetika; iza ary izao no lalana hofidiako? Hoy izy nanontany tena.
Efa tamin’ny 11 ora sy sasany vao vita ny ady hevitra, fiarahabana maro sy firarian-tsona no noraisin’i Mihary. Farany, nivoka izy roa, namonjy ny fiara ary nankany Amborovy hitsangatsangana. Asabotsy rahateo moa ny andro, andro mahafinaritra. Ny hafanàna mivaivay, soa fa nisy ny fiara azo nentina nitsangatsangana. Nijanona vetivety nisotro madrafo (ranom-boanio) teny andalana amin'ireny mpivaro antalantalana amoron'ny lalam-pasika mankany amoron-dranomasina iny izy roa. Tao amin'ny Zahamotel no nisafidianany hisakafoanana ary namonjy ny tora-pasika izy ireo nony avy eo mba hialas sasatra teo ambany elo-be feno alokaloka. Zara raha nisy olona teo amoron-dranomasina tamin'izay ka tena fahafinaretana aok'izany no tsapan'ireto mpifankatia nampihaonin'ny kisendrasendra indray.
Vetivety anefa dia niha-maro ireo mpitsangatsangana tonga hilalao rano, andro asabotsy fialan-tsasatra rahateo moa. Ary efa manakaiky ny fakan-drivotry ny Noely.
Variana ery izy roa mitazana izay ataon’ny olona. Fitafy manify fitena anaty rano sisa no teny aminy. I Mihary mirakotra lambahoany manify, i Hery mipetraka eo ambony fasika, ny tanany mamikitra amin'ity tovovavy eo anilany.
Natsofony tany anaty lambahoany norakofan'i Mihary ny tanany. Voakasiny ny lohalik’i Mihary ary dia nanomboka nosafosafoiny miadana. Nampiakariny kely hiakatra nandalo ny fe nony avy eo ary dia notohizany niakatra teo amin’ny kibo. Nankafy ny halaman’ny hoditr’i Mihary teo izy aloha. Malefaka sady toa mipetraka tsara. Nampiakariny moramora amin'izay ny tanany hamonjy ilay tati-nono somary kelikely nefa fenofeno sady midongona, nopolipolesiny mora, dia nokitikitihiny ireo loha-nono kely izay tsapany fa toa tonga dia niha vonton-dra avy hatrany.
I Mihary amin’io tsy miteny fa toa mandrimandry maso sady mandinika tsara an'i Hery sy ny fihetsiny. Tsy sahy nihetsika izy anefa fa natahotra sao dia hisarika ny mason'ny manodidina hitodika any aminy. Tsy aritrany intsony anefa nony kelikely fa tsapany nangitikitika loatra azy ny tany anatiny tany. Injay i Hery fa nampidina ny tanany amin’izay, nafindrafindrany tahaka ireny olona mamindra amin'ny fidinanana ireny ny rantsan-tananay. Toa mijaikojaiko teo ambony kibon’i Mihary, nidina ihany, nahatsapany ny hafanana miha-miakatra tamin'ny vatan'ity vehivavy eo anilany. Niova kely anefa ny famindrany nony tonga teo amin’ilay tady kely mihazona ny tako-kenatra, novelariny ny felan-tanany ka nampandriany teo ambon'ny foitran'i Mihary ary dia notohizany tamin'ny safosafo malefaka nidina nanaraka ilay hantsana mitondra any amin'ny fizaran’ny hoditra ho roa izay mbola voafono tao anaty silipo tsara.
Tsapan'i Mihary fa miha-mando ny fivaviany, tiany hotohizana kanefa… notazominy mafy ny tanan’i Hery, sady nivandravandra tamin'i Hery izy.
- "Hery ! aoka aloha!"
- "Fa ahoana!"
- "Aoka aloha, misy maharary raha vao kitihanao eo."
- "Tsy mampaninona izany…ho tsapanao fa tsy haharary intsony io rehefa avy eo !"
- "sssshhh! Hery an! Mahalalà menatra, efa miha-be olona ange eto e!"
- "Tsy sahy?"
- "Andray ry Hery," sady nosintominy tsara ilay lambahoany, "ianao ity an ! Fa angaha ianao tsy misaina afa-tsy izany?"
- "Bof! Ohatran’ny te-hanandrana fotsiny aho, raha sahy ianao!"
- "Fa angaha moa voatery tsy maintsy manao foana vao mifankatia!"
- "Porofom-pitiavana io amiko! Io no anisan’ny lalana iray ifampitàna hasambarana eo anivon’ny olon-droa. Fahafinaretana iaraha-manana sy ifampizarana."
- "Eny e! misy maha-marina azy izany, fa aiza ny fifampiresahana, aiza ny firaisam-po, aiza ny teny mamy ifanaovana sy ny tambitamby, sehatra faharoa ireny fa ny manao ihany ny anao no voalohany? Ianao izany toa ny hanafosafo sy hitady fahasambarana amin’ny alalan’ny firaisana hatrany no masaka ao an-dohanao."
- "I Mihary koa! mba te-hanandrana izany manao ety amorom-pasika izany aho e !"
- "Dia amin’izao ora manomboka miha-be olona izao? Andray ry Hery ! Tsy tiako !"
- "Tsy tianao amin’ny ahoana ary?"
- "Tsy haiko! izaho izao mba nanantena mihitsy izay fahitanao ilay famelabelaran-kevitra teo. Tsy nahitan-teny mihitsy ianao, nefa mba te-haheno izay fihetseham-ponao aho."
- "Pffff ! ianao koa ! Zavatra tsy misy kianina ireny ve dia inona moa no ambarako eo! Hay, tena marina izany, variana mihitsy aho tamin’ilay resaka hoe tsy tokony hipetrapetra-poana ny vehivavy rehefa bevohoka fa manjary msy fiantraikany amin’ny zanany any aoriana. Fa ahaona koa no hitenenanao izany, tsy amin'izy miasa mafy iny indrindra ary ve no hampisy tarazo amin’ny fiainan’ny zanany.
- "Tsy azonao mihitsy ny tiako hambara. Ahoana re ny hilazako azy e!
Tadidinao moa tamintsika tao amin'ny kilasy famaranana. Nisy an'izay mpampianatra antsika siansa sy ny zavaboahary izay. Niteny izy hoe aza avelanareo hipetrapetraka mihitsy ny vadinareo, na ianareo rehefa bevohoka! Fa izaho izao mihitsy mantsy hoy izy no nahatsapa an’izany! Tadidinao iny Madama iny? "
- " Tadidiko tsara, izy ilay niteny hoe ny zanako voalohany, mbola nianatra teny Ankatso aho tamin’izaho bevohoka azy, dia lasa matselatselaka be amin’ny fianarana, fa ilay faharoa, efa vita ny fianarana, dia naka aina tsy nanao inona na inona firy intsony fa novelomim-bady, nampiasa mpanampy, fa dia nahagaga fa dia lasa kamokamo no vontsavontsa izany ilay zaza.
- "Izay heviny izay no narahiko sy nifototrako hatramin’izay. Nandinika sy nanao famakafakàna lalina momba ny fiainan’ny reny bevohoka aho. Jerenao tsara ary, nahoana ny zanaky ny mpanakanto no lasa mpanakanto, ny mpampianatra matematika no mahay matematika be, ny zanaka dokotera vavy, lasa profesora manam-pahaizana. Noho ny inona no anton’izany hoy ianao?! Satria voatefy tao an-kibo ny sain’ilay zazakely. Tadidio fa ny loha ange no miforona voalohany ao an-kibo ao e!
Ka andramo ary, andramo dia ho hitanao, fa raha mitomany lava ny vadinao rehefa bevohoka, dia asa izay hanjo ny zanakao any aoriana, raha misendoatra lava izy, taitaitra, angamba mety harary fo ny zanakao. Ary io tsy ilay ara-batana ihany, tahaka ny hoe : marary ilay reny, na koa hoe mifoka sigara na misotro toaka, fa miantraika mihitsy amin’ny ara-tsaina.
Ka izaho dia tena mamporisika mihitsy ny reny rehefa bevohoka, tsy hipetrapetraka na handany andro fotsiny. Fa manao zavatra marobe, fanadrahoana sakafo, famakiana boky, fianarana marika sy kajikajy, fampiasan-tsaina isan-karazany. Ovaovaina ny zavatra atao. Ny fiaraha-monina ange manefy ny saina ry Hery e ! Fa hafa kokoa ilay saina raha efa voatefy tao am-bohoka. Nahoana tokoa ary no misy hatrany ny mahay kokoa ao am-pianarana, ary mifanalavitra amin’ny gisitra ny voalohany?"
- "Tsy manda izany teninao izany aho," hoy i Hery, "fa ny mahatonga ahy tsy niresaka ange, izaho lehilahy, tsy mahatsapa izany fiainan’ny bevohoka izany aho, nefa izaho no iresahanao azy. Ny tiako izao dia ny mba hampianaranao ahy izay mbola tsy fantatro mikasika ny fananahana. Ianao rahateo moa mandalina manokana momba io. Dia mba ilazao e!"
- "Fa inona anefa no tianao ho fantatra?"
- "Asa, maninona ohatra no misy olona tsy maharay lamba fa te hanao foana, nefa misy ny olona tsy taitra akory, na lahy io na vavy?"
- "Tsy haiko," hoy i Mihary, "fa maninona ianao no manontany izany?"
-" Tssss! fa ahoana koa. Aiza no tsy hahalalanao izany," sady nanao tarehy ratsy i Hery.
- "Io ry Hery, samy manana ny heviny ny tsirairay, ary tena hita tokoa, fa ny sasany tsy manaiky mihitsy, ny sasany manao amin’ny antonony, ny sasany mety tsy taitra. Fa amiko manokana, satria izaho ihany no nanao ity fanadihadiana ity dia izao:
Mbola mipetraka ihany ilay mikasika ny reny bevohoka teo. Satria, maro ny reny rehefa bevohoka dia tsy manao firaisana intsony, misy ny mbola manao mahalana, mety ho tsindraindray, ary misy aza ny tsy manaiky mihitsy fa vao mainka mitady be tsy misy ohatran'izany.
Dia mazava fa miantraika amin’ny zazakely io. Ny firaisan’ny mpivady dia fifandraisan’izy telo mianaka. Ray, Reny, Zanaka. Mety misy fahafinaretana io, ary io dia tokony ho tonga any amin’ilay zaza koa.
Ka raha ohatra izany ny vadinao, tsy maninona ve raha ataoko hoe « izaho », sady nipi-maso ihany i Mihary, tsy manao mihitsy isika mandritra ny maha-bevohoka ahy, dia tsy dia rototra firy amin’izay firaisana ny zanantsika rehefa lehibe, fa mety ny fiaraha-monina any aoriana no hanefy azy.
Fa raha manao tsindraindray nefa voalanjalanja tsara isika ohatra dia efa mizatra izay koa ny sain’ilay zaza, hany ka mifoha tsara ny sainy sy ny vatany raha vao miresaka fananahana.
Raha tena mpanao be indray isika amin'izaho mitondra vohoka, dia mety ho lasa tsy mahatan-damba araka ny noteneninao teo ny zaza mivoaka eo rehefa lehibe.
Aleo aloha hazava fa fanadihadiana nataoko io an! Fa ny marika hitako hatramin’izay fotsiny no ametrahako ny hevitro, tsy mbola misy manam-pahaizana hitako nandalina manokana ny momba io tsinona ary tena mahaliana ahy ny hanamarina ny mampitombona tanteraka an'ireo petra-kevitro ireo na tsia.
Fa ilay tranga faharoa no tsaratsara, na dia ilay fifampitan’ny fifankatiavana sy ny firaisana amin’izay telo maianaka fotsiny aza dia mahafinaritra.
Izaho izao, te hahafantatra mihitsy ny fiafaran’ireny zaza tao an-kibo niaina tao anatin’ny fampirafesana ireny. Izany hoe ilay reny bevohoka mihitsy no mampirafy, misy olona sahy manao izany an! Sao ianao dia taitra, fa tena misy mihitsy.
Nisendoatra kely i Hery, niezaka ny hitony haingana anefa izy sady niteny hoe:
- "Fa araka ny fihevitrao, tahaka ny inona ary no fiainan’ilay zaza rehefa lehibe ?"
- "Asa ! Ilay izy aloha raha ny fandinihako, tsy eo amin’ny maha-zaza azy no mitranga ny tena toetrany fa rehefa tonga amin’izay ilay fotoana hananany fahaleovan-tena isintahany amin’ny reniny na ny rainy. Rehefa mahatsapa izany izy fa afaka mitondra ny fiainany amin’izay.
Asa tokoa! mety olona ikoizana amin’ny fampirafesana, tsy mahatan-damba fa mivezivezy etsy sy eroa, raha misy olona misary zoro aminy angamba dia latsaka ao anaty dobony avy hatrany. Ary mety ho tena fahafinaretana ho azy ny manao ary tsy mifidy olona hiarahana, eny na dia olona bevohoka aza. Tsy haiko e! Eritreritro fotsiny izay fa te-hahita mihitsy aho.
Indraindray aza aho, te-hiresaka amin’ireny olona ireny hoe mba nanao ahoana kay ny mamanao tamin’izy bevohoka anao? Ratsy be izany ry Hery an! tsy fanao mihitsy, fa ho loza ny mitranga raha tahaka izany daholo ny miseho."
Very hevitra teo i Hery, tsy hitany izay hotenenina. Naforitrany ny lohaliny, dia nahankiny teo ny lohany. I Mihary mbola te-hanohy ny fanazavàny amin'io satria mbola toa mbola betsaka ny zavatra tiany holazaina. Tonga dia notapahin'i Hery avy hatrany anefa ny resany raha iny ndeha hanohy indrindra iny izy:
- "Mihary an! Tsy maninona ve raha tonga dia mody isika izao fa... "
- "Fa... fa maninona hoy ianao?"
- "Tsy haiko e! ohatran'ny te hody fotsiny aho fa ampy angamba izay nijanonantsika teto izay!"
- "Oay! Isika aza tsy mbola nitsoboka ranomasina akory," hoy i Mihary mbola nidongy.
- "Tsy mampaninona, andàna ary raha te-hilalalao ranomasina ianao fa izaho aloha hijanona eto sady hanomboka hampirina entana. Rehefa afa-po ianao dia miverena fa tonga dia mody isika."
Tsy niteny intsony i Mihary fa nitsangana, nanala ilay lambahoany teny aminy dia nihazakazaka madinika namonjy ny ranomasina efa manomboka miakatra ary nankaiky ny nisy azy roa.
I Hery kosa, nijanona teny lavidavitra teny, toy nianjadian'ny vatolampy mavesatra tao andamosiny izay mila hanapotsitra azy tanteraka raha tsy mitandrina kely fotsiny izy. Nanakoako tao an-tsainy ilay hafatry ny reniny teo ampialana aina, hafatra tsy nampoiziny nefa nambara taminy tamin'ny fotoana farany niresahan'izy mianaka.
"Misy fahamarinany ve ny tenin'i Mihary? Hoy izy niteny irery.
"Raha ampifandraisina tamin'ny hafatr'i Neny farany, dia tena mitombina tokoa izay zavatra nolazain 'i Mihary teo e. Nefa petra-kevitra ange ny azy fa tsy voaporofony akory e! Nefa dia izaho izao no porofo izay andrasany".
I Mihary amin'io fotoana io mankafy ery hatsiakan'ny ranomasina amin'ity andro migaingaina. Nakopakopany ny tanany hiantso an'i Hery, nefa ity farany tsy nihetsika teo amin'ny toerany fa toa niantso azy hiala tao anaty ranomasina indray aza.
Farany, nanatona an'i Hery izy nanontany izay manjo ity olon-tiany.
- "Fa ahoana?"
- "Metimety kokoa isika miverina any amin'ny hotely amin'izay e!"
- "Fa maninona ary i Hery no miova tampoka tahaka an'io e! Sa nalahelo ianao tamin'ilay tsy navelako hanao tamiko teo?"
- "Sshh! te-hody fotsiny aho fa tsy aleonao ve misolo akanjo amin'izay."
- "Eny ary ko! ianao moa no mitondra fiara ka ataoko ahoana. Fa sao dia marary ity ianao e! Sao dia tsy zakanao ny sakafontsika teo. Izaho ange dokotera ry Hery e!"
Tsy niteny intsony i Hery fa ny fiara no novonjeny, i Mihary kosa lasa namonjy efitra kely fisoloana akanjo. Vita iny dia namonjy ny fiara nisy an'i Hery izy.
Tsy nisy niteny teny an-dalana, i Hery miankina amin'ny sisin'ny varavaran-kely, toa tsy mitombina mihitsy ny sainy, lasalasa vinany, toa mivaloharika, ny lalana no nojereny tsara.
Tonga tao amin'ny hotely dia nosokafany ny varavarana aoriana hakany ny akanjo sy ny entan'i Mihary. I Hery no nitaridalana hamonjy ny efitrano nony avy eo moa i Mihary nanaraka moramora avy ato aoriana.
Nony tonga tao an'efitra…
- "Hery an! Mahatsikaritra zavatra hafahafa mihitsy aho aminao ity. Lazao fa naninona tampoka teo ianao e? Marary inona? Izaho ange eto afaka hitsabo ny aretina mahazo anao e!"
- "Raha vitan'ny fitsaboana izany dia efa nolazaiko taminao," hoy i Hery somary tezitra.
- "Andray ry Hery! Nisy zavatra tsy tantinao nolazaiko angaha?"
Nanomboka nanganohano ny mason'i Hery, nanondrika ny lohany sady naka andry teo ambony latabatra kely ny tanany. Nalahelo mafy ny reniny izy ka nila ho latsa-dranomaso. I Mihary amin'io tsy tonga saina mihitsy amin'izay zava-miseho tany andohany tany fa ny hany azony natao dia ny nanatona an'i Hery sady nanafosafo ny lamosiny.
- "Hery! Fa maninona ho'aho ianao? Izaho ve no mahatonga anao mitady hitomany?"
- "Mihary an! Fa maninona ianao no mandalo amin'ny fiainako? Fa nahoana ianao no nifanena amiko taty? Ny fiainako efa feno fahoriana sy fijaliana ary mangidy sy mafaitra nefa mbola omenao ny tangena mety hanapoizina ahy indray."
- "Fa nahoana, inona no nataoko taminao."
- "Hevitra manokana daholo ireny nambaranao teo ireny, hevitra nolalininao hatramin'izay, nefa dia taty amiko no nahitanao ny porofony ary tsy midivotra mihitsy."
- "Hery an!" hoy i Mihary manambitamby, "fa inona moa no ifandraisanao amin'ilay noteneniko teo?"
- "Ilay mikasika ny reny bevohoka nefa mampirafy, dia tranga nanjo ahy mihitsy! Asa izay tsoa-kevitra nahazoanao azy fa tena fiainako no nambaranao!"
sady latsa-dranomaso i Hery no nigogogogo nitomany.
Gaga be i Mihary.
- "Fa nahoana?"
Fahiny mantsy dia nandalondalo tany amin'i Hery foana i Mihary, ary ny Maman'i Hery aza dia olona niana tamin'ny fivavahana ary tena niaritra ny mafy tamin'ny fitaizana sy fanabeazana an-janany ho olom-banona, tsy naka vady hafa mihitsy fa nikolokolo samirery ity zanany lahitokana samy irery. Ka nahoana no hoe nampirafy; zavatra tsy azo eritreretina izany hoy i Mihary manontany tena.
Safosafo fotsiny no nataony tamin'i Hery hampitony ny fony. I hery mbola mifokofoko mitomany hatrany, tsy naharesaka intsony.
Efa afaka ny minitra vitsy vao niteny izy hoe
- "Talohan'ny nahafatesan'i Mama, dia nametraka hafatra tamiko izy..., nitantara ny fiainany taloha tamin'ny fahaveloman'i Dada, ary nifona tamiko izy noho ny fahotana tsy roa aman-tany nataony tamin'izy bevohoka ahy. Dia arak'ireny nolazainao ireny, nampirafy izy ary izany aza no tena nampaharary fo an'i Dada ka nitarika ny fahafatesany.
Nafenin'i Mama ahy izany rehetra izany, ary rehefa ho tapitra ny ainy vao nangataka famelàna tamiko izy.
Nefa izao, ianao tonga eto anoloako eto, dia manambara ahy ny fiainako ary voalazanao amin'ny ankapobeny tsy misy hokianina mihitsy."
- "Ka iny ange ry Hery petra-kevitra mbola tsy voamarina akory e! vao noeritreretiko fotsiny ireny aloha araka ny fahitako ny zava-misy fa tsy voatery ho tahak'izay ny tena fandehany."
- "an, an! Tsia dia tsia ry Mihary an! Tena ilay voalazanao no mamaritra ny fianako. Tsy afaka ny hanafina na inona na inona aminao intsony aho. Menatra aminao aho Mihary an! Nitovy fahaizana isika, niady ny toerana voalohany hatrany, ary izao aho vao mahatsapa fa tena anjaranao amin'izay ny maka ny toerana voalohany fa izaho tsinona efa nivary lavo" Mihary an! Mifona aminao aho, mifona fa namitaka sady tsy sahy nanambara anao akory izay tena fiainako."
Dia notantarain'i Hery avokoa ny lasany rehetra nandritra ny tsy naha-teto an-toerana an'i Mihary, ny fiarahany tamin'i Alexia, ny fisakaizany tamin'i Malala na dia efa bevohoka aza, ny zanany mianadahy, ny sangisangy tamin'i Tahiana ary izao izy mbola roboka amin'i Mihary izao indray.
- "Gadran'ny antson'ny nofo aho, ary tsy nahatohitra fakam-panahy, nitady porofo ianao? Ity manoloana anao ity no izy, porofo mivaingana satria vao nanomboka niasa fotsiny aho, araka ilay teninao hoe manana fahaleovan-tena, dia tsy nahatohitra ilay fakam-panahy fa nisakaiza tamin'i Malala nefa renin'ny fofombadiko. Izao efa tsy eo intsony i Mama, dia nivarilavo ny fiainako.
Ka iza no omeko tsiny, i Mama efa any am-pasana ve? Sanatria, sanatria amiko izany! Fa izaho manokana, izaho sy ny rendrarendrako, ny hadalako sy ny fitiavako diso teorana loatra."
- "Hery an! aza manao izany ianao! Fantatrao tsara fa voaloham-pitiavana nahay nifamaly tsara ny antsika. Voatery najanona satria nanana tanjona nitovy. Ary izay tanjona mitovy izay no entiko hobanjinitsika, tsy maintsy hanampy anao aho, na inona na inona fomba ampiasaiko hanovako io toetranao io. Mino tanteraka aho fa azo amboarina tsara ny fiainanao, azo averina tefena indray ny sainao mba ho olo-marina. Izaho mihitsy no handray an-tanana ny fanomezana ny toro-lalana fa matokia, tsy hanary anao aho."
Samy nanana ny fahadisoam-panantenany avy izy roa, ny iray ilay tonga dia nisarangotra, tsy nanadihady tsara akory, ny iray tsy nahatan-damba fa tonga dia nitsabaka fitiavana tamin'ny fotoana fohy loatra.
Soa i Mihary fa olona tsy be fihetsem-po fa na dia nanenina ny zava-bitany tamin'i Hery aza izy dia vonona hitraka hiatrika ny fiainany ho avy indray.
Olom-baovao no ezahiny hotefena, olona tokony hahay hiatrika ny ho avy am-pamendrehana ho reharehan'ny firenena. Mety ho eny an-tanany ny fanalahidin'izany.
Naleony namela an'i Hery irery tao an'efitranony, fa lasa izy namonjy ny fandriany, namoaka ny boky mikasika ny psykolojia nikaroka izay petra-kevitra vaovao homeny ity namany notolorany fitiavana voalohany ary tsy maty hatramin'izao.
tadiom_pitiavana@yahoo.fr (Misaotra betsaka an'i Tadiom-pitiavana tamin'ny finiavana hanoratra ity tantara ity hatreto. Mankasitraka.) I Loulou indray no manohy azy ao amin'ny Pejy 35. Misaotra an'i Loulou (France).
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 4:: Hametraka hevitra (1) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)